That's so good, right?: September 2012
ကလေးတစ်သိုက်ရဲ့ အော်သံနဲ့ အတူ ဆိုင်ရှေ့ မှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ပြေးလွှားသံတွေကြားလိုက်ရတော့ သုသု နဲ့ ကီလေး တို့ နှစ်ကောင် ခေါင်းထောင်လာကြသည်။ သူတို့ လေးတွေ ကလေးပီပီ စပ်စုချင်တဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ ဆိုင်ရှေ့ ကို သွားဖို့ မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားလေးတွေနဲ့ ကျွန်မကို ခွင့်တောင်းကြည့်ကြည့်နေကြတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကပဲ သူတို့ လက်ကလေးတွေဆွဲခေါ်လို့ ဆိုင်ရှေ့ ကို ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် စာထဲကို ဘယ်လိုမှ စိတ်ဝင်စားတော့မှ မဟုတ်မှန်း သိတဲ့အတွက် သူတို့ လေးတွေကို အလိုလိုက်ရင်း ကျွန်မလည်း အဲဒီ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားနေခဲ့မိပြီလေ။
နေရောင်အောက်မှာ သူ့ ရဲ့ အနီရောင်ဖဲ ဂါဝန်ကြီးက လွှားကနဲ ၀ဲပျံရင်း သူ့ ရဲ့ သီချင်းသံနဲ့ အတူ အနုပညာ တစ်ခုကို ဖော်ကြူးနေလေရဲ့ ။
" မလွမ်းရဲသေးဘူး မောင်ရယ်........ခဏတော့ မထားခဲ့ပါနဲ့ ....အချစ်ရိပ်လေးမှာ အိပ်နေချင်သေးတယ်......." အယ်ဆိုင်းဇီ ရဲ့အသံချိုချိုလေးကို လိုက်တုပြီး မုဒ်အပြည့်နဲ့သီဆိုနေတဲ့ သူ့ အသံသြသြလေးကလည်း ကျွန်မစိတ်ထဲတော့ တစ်မျိုး နားထောင်ကောင်းနေတယ်လို့ ပဲ ထင်မိတယ်။ ကျွန်မတို့ ဆိုင်ရှေ့ နားမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ရှိတာကြောင့် အဲဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လာသောက်နေကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်ကလေးတစ်သိုက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု နဲ့ သူဖျော်ဖြေနေတာကိုး။ သီချင်း ၃ ပုဒ်ကို တစ်ထောင်ကျပ် ကို ငါးရာထားဆိုပြီး ဈေးဆစ်နေသေးတာကို စိတ်ထဲ မကောင်းပေမယ့် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ သူတို့ အတွက် နန်းကြီးသုတ်တစ်ပွဲကို တစ်ထောင်လောက်ပေးစားနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ သူတပါးရဲ့ ဝမ်းစာရှာဖွေစားသောက်ခြင်းအပေါ် ဒီလို စနောက်ပြီး တန်ဖိုးစစ်နေတာကို ကျွန်မ ပုံကြီးချဲ့ ပြီး အများကြီး ဆက်မတွေးချင်နေခဲ့ဘူး။ သူတို့ လေးတွေဟာ လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ ရဲ အသိဥာဏ်ထဲကို ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းဆိုတာတွေဟာ ကျွန်မရှိစေချင်နေတဲ့ အတိုင်းအတာအတိုင်း ဘယ်ရှိနေနိုင်မလဲလေ။
သုသုနဲ့ ကီကီလေး တို့ ကတော့ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရင်း ပျော်နေကြပုံပဲ။ တခစ်ခစ်နဲ့ သီချင်းတောင် လိုက်ညည်းနေလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မ သတိထားမိတာက ဘာတေးဂီတ ပံ့ပိုးမှုမှာ မပါပဲ သူ့ ရဲ့ သီချင်းသီဆိုမှုဟာ အသံသြသြရှတတနဲ့ အရမ်းကို စွဲဆောင်မှုရှိနေတာကိုပါ။ သူဟာ ဂီတမှာ ပါရမီရှိသူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်မစိတ်ထဲကနေ တိတ်တိတ်လေး အမှတ်ပေးနေမိတယ်။ တဆက်တည်း ကျွန်မ စိတ်အတွေးထဲ ၀င်ရောက်လာတဲ့ မေးခွန်းက သူဘာလို့ ဒီလို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။ သူ့ မှာ မိသားစု စီးပွားရေး အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုရင်တောင် ဘာလို့ များ လူအများကြား ဂုဏ်သိက္ခာကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရတဲ့ အဲဒီအလုပ်ကြီးကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပါလဲပေါ့လေ။ သူဟာ ယောက်ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်ရက်နဲ့ ခုလို မိတ်ကပ်ထူထူလိမ်း၊ အရောင်တောက်တောက်ကြီးတွေ ၀တ်ပြီး ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်မှ မရနိုင်တဲ့ အလုပ်အတွက် ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ များ ရှင်သန်ရပ်တည်တာပါလိမ့်လို့ ကျွန်မ သူ့ ကို စကားပြောချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်မစိတ်ထဲ အတွေးတွေ တန်းစီဝင်ရောက်နေခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ မမျှော်လင့်တဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ကျွန်မမြင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒါကတော့ လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သီချင်းဆိုနေတဲ့ သူ့ ရဲ့ တင်ပါးကို ခြေထောက်နဲ့ လှမ်းကန်လိုက်ပြီး "အခြောက်မ ဒီနားကို လာစမ်း၊ အာဘွားလာပေးစမ်း " ဆိုပြီး စရိုက်ကျစွာ ပြောဆိုနေတာပါ။ သူက မျက်စိတစ်ဖက် မှိတ်ပြပြီး Flying kiss လေးနဲ့ ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းဆိုလိုက်တာကို ဟိုကလေးတွေက တ၀ါးဝါးရယ်ပြီး သူ့ ကို စနောက်နေတာကို ဘေးနားက ကလေးတစ်သိုက်ကလည်း ခုန်ပေါက်ပြီး အားပေးနေကြတယ်။ မြင်ကွင်းကတော့ ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ အပေါ်ယံ မြင်လို့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာ သူ့ နေရာကို ၀င်ရောက်ခံစားကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ အပြင် သူတို့ တွေရဲ့ ဘ၀တွေကို စာနာနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ အခြေခံစိတ်လေးနဲ့ အတွေးတွေ လွင့်မျောနေမိပြန်တယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုကို ရှေးတန်းတင်တဲ့ စိတ်နှလုံးစားနူးညံ့တဲ့ လူမျိုးရယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထားကြရသူတွေပါ။ အဲဒီ လူ့ အသိုက်အအုံထဲမှာ သူတို့ တွေက တတိယလိင်အဖြစ်နဲ့ တည်ရှိနေကြခြင်း အပေါ် ကျွန်မတို့ တွေ ဘယ်လို သဘောထားခဲ့ကြသလဲ။ လမ်းမှာ မိန်းမငယ်ချောချောလေး နှစ်ဦး နဲ့ မိန်းမလျာ ဟုခေါ်ဆိုကြသော ထို တစ်စုံတစ်ယောက်များ ယှဉ်ပြီးလျှောက်လာကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ လူ့ အသိုက်အအုံကြီးရဲ့ အာရုံဟာ မိန်းမငယ်ချောချောလေးများကို ကျော်လွန်ပြီး သူ့ အပေါ် လုံးလုံးလျားလျား ကျရောက်တတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာလို့ လဲ။ ယောက်ကျား၊ မိန်းမ ဆိုတာ သဘာဝတရားကြီးအတိုင်း တည်ရှိနေတဲ့ လိင်အမျိုးအစား များဖြစ်ပြီး သူတို့ တွေကိုတော့ သဘာဝကို ဆန့် ကျင်ဖြစ်တည်နေသော ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် လူသားများလို့ ကျွန်မတို့ ကနဦးကတည်းက သတ်မှတ်လိုက်ကြခြင်းကြောင့်များလား။ ဒါမှ မဟုတ် သူတို့ တွေရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံဟာ အများတကာနဲ့ ဆန့် ကျင်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေလို့ များလား။ ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ တဆက်တည်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေက "ရွံစရာကြီးတွေဟယ်"
" ရှက်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ.......လူဖြစ်ပြီး လူလိုမနေကြဘူး"
" နှမြောစရာ ကောင်းလိုက်တာနော် မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ကျားဘ၀ကို ရထားတာတောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးမထားတတ်ကြတဲ့သူတွေ"
" အတော်ရွတဲ့ အမျိုးတွေ * အခြောက်တွေ"
" ဟေ့ရောင်တွေ သွားမစနဲ့ နော် စွဲစိခံရလိမ့်မယ် "
ဒီလို မှတ်ချက်မျိုးတွေကို သင်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောဖူးရင်ပြောဖူးလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကြားတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုပဲ ကျွန်မတို့ ဟာ သူတို့ တွေကို မြင်ရင် လိုက်မကြည့်ပဲ မနေနိုင်တဲ့သူ ရှားပါတယ်။ အာရုံတော့ စိုက်မိကြတာချည်းပဲ။ ဒါ ကျွန်မတို့ သတိမထားမိတဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ လူနေမှု စရိုက် အလေ့အထ တစ်ခုရယ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒါဟာ ကောင်းသောအကျင့်တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အားလုံးလက်ခံကြမယ်လို့ ကျွန်မမျှော်လင့်မိတာပဲ။ ကျွန်မ မှာ မောင်ငယ်လေး တစ်ယောက် ရှိပါတယ် သူက Charming Draft လေးပါ။ သူ့ ဟာ အခု အသက်အရွယ်ရသည်အထိ လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပုံမှန်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သာမာန်လူလို သွားလာနေထိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတုန်းပါ။ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သူတို့ လို လူမျိူးလေးတွေကို ကျွန်မတို့ လူ့ အသိုက်အအုံက အာရုံစိုက်ပြီး အထူးအဆန်းလို ဆက်ဆံကြတာကြောင့်ပါ။ သူနဲ့ အတူ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကို သွားကြတုန်းကဆို သူ့ ရဲ့ ရဲဝံ့စွာ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှု တစ်ခုကို ကျွန်မကောင်းကောင်း သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးများ ဘာ့ကြောင့် ဒီလို လူတွေကို အမြဲတမ်း အထူးအဆန်းကြီး သဖွယ် အာရုံစိုက်ကြရတာလဲ။ သူတို့ အတွက် ထည့်စဉ်းစားပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ တရားခေါင်းပါးလွန်းနေတာလား။ တချို့ များဆို နောက်ကလေ လက်ညိုးကြီးထိုး အချင်းချင်း အ့သြိပေးလို့ အော်ဟစ်ပြီးကို လိုက်ကြည့်ကြတယ်။ ကလေးတွေဆို နောက်ကနေကို ပြေးလိုက်လာတယ်။ အဲဒီကလေးလေးတွေကို စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ပြုပြင်ပေးရမယ့် လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုက ပွဲကြည့်သလို ကြည့်နေကြပြီဆိုမှတော့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒါဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ပြသနာတစ်ရပ် မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ တွေအတွက်ကတော့ စိတ်ဝေဒနာ တစ်ရပ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ မောင်လေးက ပြောတယ်။ သူ စင်ကာပူ မလေးရှား နိုင်ငံတွေ သွားလည်တုန်းကဆို အရမ်းကို စိတ်လက်ပေါ့ပါးပျော်ရွှ့င်ရတယ်တဲ့။ သူ့ ကို လူပုလေးရယ်လို့ ဘယ်သူတစ်ဥိးတစ်ယောက်ကမှာ အာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘူး။ သူ့ ဘေးနားကနေ ဖြတ်သွားလို့ တောင် သူ့ ကို လှည့်မကြည့်ပဲ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ် လုပ်နေကြတာတဲ့လေ။ သူ့ ကိုယ်သူ သာမာန်လူတစ်ယောက်လို ခံစားခဲ့ရတာ အဲဒီအချိန်လေးပဲရှိလို့ သူအရမ်းကို ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်ခဲ့ရတာပါတဲ့။ ကဲ။
ကျွန်မတို့ လူ့ အသိုက်အအုံကရော ဒါကို ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဆိုပြီး မပြုပြင်နိုင်ဘူးတဲ့လား။ သူတို့ တွေဟာ လည်း လူ့ အဖွဲ့ အစည်းထဲက လူပါပဲလေ။ သူတို့ ရဲ့ ရပ်တည်ရှင်သန်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးကို ရင်ထဲ ပျိုးချကြည့်ကြစေချင်မိတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလို စိတ်ကလေးကို မွေးမြူလိုက်တယ်ဆိုတာ အဲဒီသူ ကိုယ်တိုင်အပေါ်မှာ ဦးစွာ အကျိူးသက်ရောက်တာပါလေ။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားခြင်းဆိုတာ စာတန်းထိုးပြမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို အသေးအမွှားလို့ ယူဆထားတဲ့ အပြုအမူလေးတစ်ခုကနေလည်း ဖော်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ သူတို့ ကို သာမာန်လူသားများပါလို့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် သူတို့ အပေါ် ဒီလို အပြုအမူတွေကို ရှောင်ကြဉ်လိုက်ဖို့ သတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ တွေကို ကူညီရာရောက်မယ်။ သူ တို့ ဘ၀ ရပ်တည်ခြင်းအတွက် ခွန်အားတစ်ရပ်ဖြစ်စေမယ်လို့ ကျွန်မအနေနဲ့ ယုံကြည်မိတယ်။
အဲဒီလိုပါပဲ အခြောက်ကြီး လို့ နာမည်ပေးထားကြတဲ့ လူတန်းစား တစ်ရပ်ကိုလည်း ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ လူ့ အသိုက်အအုံမှာ အားမပေးနိုင်သည့်တိုင်အောင် လက်ခံသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ သူတို့ တွေဟာ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု အဖြစ်တည်ရှိနေကြခဲ့ပါပြီ။ လူ့ အသိုက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံး ယဉ်ကျေးပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ ဆိုတာ အဲဒီထဲမှာ ပါတဲ့ လူသားတွေအားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ သူများကို နှိမ်ချခြင်းဖြင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘယ်တော့မှ မြင့်တက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အနာဂတ်ကို ဖန်တီးကြမယ့် လူငယ်လူရွယ်လေးတွေရဲ့ အခြေခံစိတ်ဓါတ်ကလေးကိုသာ ထိန်းညှိပြုပြင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် တချိန်မှာ ယဉ်ကျေးသော လူမျိူးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ထဲ ဒီအလေ့အထလေးလည်း အကျုံးဝင်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတယ်။ တဖက်က ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ တတိယလိင်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ဟာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံတွေကလည်း အများလက်မခံနိုင်တာတွေရှိတဲ့အတွက် သူတို့ တွေကိုလည်း ကိုယ်ကလေးစားမှု အသိအမှတ်ပြုမှုကို ခံယူချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပြုမှုနေထိုင်ပုံတွေကို ပြန်လန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။
သူတို့ တွေရဲ့ အပြောအရ သူတို့ ဟာ ယောက်ကျားဟိုမုန်းနဲ့ မိန်းမစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူတို့ ရဲ့ စိတ်တွေဟာ သူများတကာထက်ပိုပြီး တက်ကြွတတ်တာကို "ဆပ်ဆလူးထတယ်၊ ရွတယ်၊ ကဲတယ် " ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာရတာပါပဲ။ အဲဒီအတွက် သူတို့ ဘက်ကနေလည်း ဆင်ခြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အပြောမခံရဖို့ ဆိုတာ အပြောမခံရအောင်နေဖို့ က အဓိကကျပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တည်ငြိမ်စွာနေပြီး လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အကျိုးရှိစွာ ရပ်တည်နေကြမယ်ဆိုရင် ဝေဖန်ရှုံချသံတွေဟာ လုံးဝမှေးမှိန်သွားမှာပါ။
ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးတွေ ဆက်သွားလိုက်တာ သူ့ ရဲ့ တေးသီချင်းသံလေးအတော်ဝေးဝေးရောက်သွားတာကိုတောင် သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။ ကျွန်မစိတ်ထဲက အတွေးတွေအတွက် ကီကီလေးနဲ့ သုသုတို့ ကို သူတို့ တွေဟာ စနောက်စရာ ရှုံ့ ချစရာ လူမျိုး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြောပြနိုင်မယ်လေ။ အနည်းဆုံး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ သေးသေးလေးကနေ စတင်လိုက်ခြင်းကသာ တကယ်စတင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောစကားလေးကို မှတ်ထားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ တူလေးနဲ့ တူမလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကီကီနဲ့ သုသုတို့ အတွက် ကျွန်မရဲ့ ဒီနေ့ ည အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်ဟာ နူးညံ့သော လုပ်သားပျားများ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာတော့မှာပါ။
လူသားတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး ကိုယ့်စိတ်ထား ခံယူချက်ကို ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် လူ့ အသိုက်အအုံကြီး ပိုမို သာယာ ယဉ်ကျေးလာစေဖို့ မျှော်လင့်မိတာ ကျွန်မရဲ့ စေတနာပါ။ နောက် ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ တိုင်းတပါးသားတွေ ပိုမိုများပြားလာတဲ့အခါ ဒီအပြုအမူဟာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ထောက်ပြစရာတစ်ခု မဖြစ်ဖို့ကျွန်မတို့ တွေလည်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ထို တတိယလိင် လူတန်းစားများကိုလည်း လူ့ လောက ကောင်းကျိုး ပိုမိုသယ်ပိုးနိုင်တဲ့သူများ ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိရင်း အဲဒီညနေခင်းရဲ့ အတွေးတွေဟာ ကျွန်မစိတ်ဝိဥာဉ်ထဲ တည်နေခဲ့ပြန်ပြီလေ။
Posted by Alex Aung at 7:35 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 10:36 AM 1 comment:
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် တိုးညှင်းစွာရေရွတ်လိုက်ြပီး ဇင်မင်း သူရှိရာသို့ လျှောက်သွားရန်ပြင်လိုက်စဉ် သူ့ဘေးနားမှ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကိုပါ မြင်လိုက်ရသဖြင့်ခြေလှမ်းတွေရပ်တန့်သွားသည်။ ကျွန်တြော်ကည့်နေတုန်းမှာ ပင် ဇင်မင်းသူကို ထိုကောင်မလေးက ရေခဲမုန့်ခွံ့ကျွေးနေသည်။ဇင်မင်းသူက ထိုကောင်မလေးခွင့်ကျွေးသော ရေခဲမုန့်ကို ပါးစပ်ဟပေးလိုက်သည်။ ထိုကောင်မလေးက
ကျွန်တော့်လက်ထဲမှ အထုတ်တစ်ချို့ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသွားသည်။ ကမ္ဘာ ကြီးတစ်ခုလံုး ချာချာလည်သွားသလို ကျွန်တော့် စိတ်တွေ မူးနောက်သွားသည်။ ကျွန်တော့် အာရုံတွေရှုပ်ထွေးသွားသည်။ ခံပြင်းစိတ် တွေနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ဒေါသတွေသည် ခန္ဓာ ကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးပွက်ပွက်ဆူအောင် တပ်လှန့် နိုးဆော်လိုက်လေသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်မျက်လုံးကိုပင်မယုံနိုင် လောက်အောင် အြံ့သသွားမိသည်။ သ…ူ ……..သူ……………ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်နေရတာလဲ။
တောက်တစ်ချက်ကို အနှစ်အရသာရှိရှိ ဒေါသံပါပါဖြင့် အားရပါးရခေါက်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ြကီးတစ်ခုလုံး မီးရဲရဲ တောက်နေသည့် ထင်းစကြီးဖြင့်အထိုးခံ ထားရသလိုတမြညြ့်မည့်ပူဆွေးလာသည်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများသည်လဲ နဂါးတစ်ကောင်လို စူးရှကာအရောင်တွေတဖျက်ဖျက်လက်နေပြီး မြင်ရသူအဖို့ ပြာကျသွားနိုင်လောက်သည်။ ကျွန်တော်ကြုံတွေ့လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းက ကျွန်တော့်ကို နာကျင်အောင် ဒေါသထွက်အောင် မခံချင်အောင်တဟုန်းတည်း နှိုးဆော်ပေးလိုက၏် ။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာသလို အသက်ရှုသံတွေလည်းပြင်းလာသည်။ ယခု ကျွန်တော်သည် မှုန်ယိုနေသော ဆင်တစ်ကောင်လို တရှုးရှုးတရဲရှဲ ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော် အကြည့်ကို တစ်ဖက်သို့ လွှဲပစ်လိုက်ပြီး သူတို့ စုံတွဲကို ကျောခိုင်းပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်မမြင်ချင်သည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ကျွန်တြော်ကည့်နေနိုင်လောက်သည့် သည်းခံမှုမျိုးကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်သေးပါ။ ကုန်းရုံးထနေသော ကျွန်တော့်ဒေါသတွေသည် ကျွန်တော့် ကိုညှင်းပန်းနိုပ်စက်နေသည်။ ကျွန်တော်မျက်နှာ လွှဲ ပစ်လိုက်စဉ်မှာ ပဲ ဇင်မင်းသူမျက်နှာ က အမှတ်မထင်ကျွန်တော့်ဖက်သို့ လှည့်လာ ကာ ကျွန်တော့်ကို မြင်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ကိုမြင်သွားတော့ သူအနည်းငယ် မချင့်မရဲဖြစ်သွားကာ ကောင်မလေးကို တီးတိုးစကားဆို လိုက်ြပီးကျွန်တော်ရှိရာဆီသို့ လျှောက်လာသည်။
ကျွန်တော့်နားသို့ ရောက်လာတော့ သူစကားဆိုလာသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကြည့်မနေပါ။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ကို တစ်ဖက်သို့ လှည့် ထားသည်။ ယခုချိန်တွင် ကျွန်တော်သူ့ကိုရင်မဆိုင်ချင်လောက်အောင် မုန်းတီးနေသည်ဆိုလျှင်မမှားပါ။ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်သည့် သူတစ်ယောက်ကျွန်တော်အမြတ်နိုးဆုံးသူတစ်ယောက်က ကျွန်တော် အမုန်းတီးဆုံး သစ္စာ မရှိသည့် လုပ်ရပ်ကို ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် လုပ်ပြလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ဘယ်လို နှလုံးသားမျိုးဖြင့်သူ့ကို ရင်ဆိုင်ရမည်နည်း။
သူနှင့်ကျွန်တြော့်ကားမှာရှိသည့် သံယောဇဉ်တွေ သူ့နှင့်ကျွန်တြော့်ကားမှာ ရှိသည့် ယြုံကည်မှုတရားတွေကို သူအလွဲသုံးစား လုပ်ပစ် လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်နားကို ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ပခုံးတစ်ဖက်ကို သူလာကိုင်ကာ ကျောက်ရုပ်ြကီးလိုရပ်နေသော ကျွန်တော့်ကို ကိုင်ကာထပ်ခေါ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော်သူ့ကို စိမ်းစိမ်းကားကားကြီး ကြည့်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွင် ဒေါသအငွှေ့တွေ ရစ်သိုင်းနေသည်။ ကျွန်တော် သူထလာသည့် စားပွဲခုံသို့ ကြည့်လိုက်တော့ သူနှင့်အတူ ထိုင်သည့်ကောင်မလေးက အအေးပုလင်းပိုက်ကို စုပ်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကိုငေးကြည့်နေသည်။
”အပြင်ကို ခဏလိုက်ခဲ့ မင်းကိုငါပြောစရာရှိတယ”်
အမူအရာတွေ ပျက်ယွင်းနေသည့်သူ့ကို ကျွန်တော်စိတ်မရှည်စွာ ဖြင့် လက်ကိုဆြွဲပီး အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့သည်။ ဆိုင်ဝမှ မှန်တံခါးကို တွင်းဖွင့်လိုက်ပြီး အပြင်သို့ရောက်သောအခါ သူ့လက်ကိုကျွန်တော် ဆောငြ့်ပီးလွှတ်ချလိုက်သည်။ အပြင်ဖက်တွင် ကားသံတွေ ဆိုင်ကယ်သံတွေ လူသံတွေဖြင့်နေပြူကီးကြားထဲတွင် ဆူညံနေသည်။ သူ့မျက်လုံးများက ဂဏာမငြိမ်သလို သူ့အသားတွေလည်း နွေးနေသည်။ သေချာပါသည် သူကျွန်တော့်ကိုကြောက်နေတာပဲ ဖြစ်ရမည်။
”အဒဲီ့ကောင်မလေးနဲ့ မင်းနဲက ဘာတွေလ?ဲ ? ဘယ်လိုပက်သက်နေလ?ဲ ? ”
မင်းပြောစမ်း ဇင်မင်းသူ မင်းပြောစမ်း။ မဟုတ်ဘူးလို့ မင်းပြောစမ်း။ ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့က ဘာမှမပက်သက်ပါဘူးလို့ မင်ငြင်းစမ်း။ မင်းငြင်းပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ငါအချစ်ဆုံးလူတစ်ယောက် ငါတန်ဖိုးအထားဆုံးလူတစ်ယောက် ဆီက ငါ့အပေါ် သစ္စာ မဲ့တဲ့စကားတွေ ပြောလာမှာ ကို ငါမကြားချင်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ငါ့နှလုံးသား ကသွေးမရှိတော့ဘူး ဖြူဖတ်ြဖူလျြော်ဖစ်နေပြီ။ အားအင်တွေချိနဲ့ နေပြီ။ မင်း သိရဲ့လား။
”သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က…………..ဟို……ရည်း ………..ရည်းစားတွေပါ ဆရာလေး”
ကျွန်တော်သူ့ ကော်လံစကို လှမ်းဆွဲပစ်လိုကသ် ည်။ ထို့နောက်သူ့မျက်နှာ ကို ကျွန်တော့်နားသို့ ဆွဲလိုက်၏ ။ သူ့ မျက်လုံးတွေ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်မနေပါ။ သူခေါင်းငုံ့ထားသည်။ ထိလွယ်ရှလွယ်သောကျွန်တော့်စိတ်တွေသည် သူ့စကးတစ်ခွန်းကြောင့် မီး တောင်ြကီးပေါက်ကွဲသလို အပြင်း အထန်ပူဆွေးလောင်မြိုက်သွားသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်
”မင်းနဲ့အဲ့ကောင်မလေးက ရည်းစားတွေဆိုတော့။ ငါနဲ့မင်း နဲ့က ဘာတွေလဲ။ မင်းအချစ်က ပေါက်လွှတ်ပဲစားနိုင်လှချည်လား။ မင်းငါ့ကို လှည့်စားနေတာလား။ မင်းငါ့ကို အရူးလုပ်မလို့လား။”
”ကျွန်တော် ရှင်းပြပါရစေ ဆရာလေးရယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ဆရာလေးကို ဒုက္ခရောက်စေချင်တဲ့စိတ်တွေ လှည့်စားချင်တဲ့စိတ်တွေ လုံးဝမရှိပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ဆရာလေးကို တစ်ကယ်ချစ်တာပါ ဒါပေမယ့် အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော်က………………..”
”တော်တော့ ဟေ့ကောင်။ ငါဘာမှမကြားချင်တော့ဘူး။ မင်းပါးစပ်က ထွက်လာမယ့် ငါ့အပေါ်သစ္စာ မရှိတဲ့ အကြောင်းတွေကို ငါမကြားချင်ဘူး။ မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းတွေ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေ အကုန်လုံး ဘာတစ်ခုမှ ငါမသိချင်ဘူး။ မင်းဟာ တစ်ကယ်တော့ အမြီးကျက်အမြီးစားခေါင်းကျက်ခေါင်းစားဆိုတဲ့ လူစားမျိုးပဲ။ မင်းဟာ အလကားကောင်………….တောက”်
”ဆရာလေး ပြောချင်တာတွေပဲ ပြောနေတော့မှာ လား၊ ကျွန်တော့်ကို ဘာမှပြောခွင့်မပေးတော့ဘူးလား။ကျွန်တော်တစ်ခုလောက် ပြောခွင့်ရပါရစေ။”
”ဘာပြောချင်သေးလို့လဲ။ မင်းငါ့ကို လိမ်လို့အားမရသေးဘူးလား။ အခုချိန်ထိမင်းငါ့ကို ပိပိရိရိ လိမ်နေခဲ့တယ်။ ငါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း မင်းလိမ်သမျှကို အဟုတ်ြကီးထင်ပြီး ယုံနေခဲ့မိတယ်။ ဘ၀မှာတစ်ခါအလိမ်ခံရရင် ကံမကောင်းလို့ နှစ်ခါအလိမ်ခံရပြီဆိုရင် ကိုယ့်ညံ လို့တဲ့။ အဒဲီ့တော့ ဆောရီးပဲ ဇင်မင်းသူ မင်းကိုငါ ထပ်လိမ်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ မင်းရဲ့ အုတ်ြကားမြက်ပေါက် အချစ်တွေကိုလည်း
”ဆရာလေးရယ် ကျွန်တော့်ကို အဲ့လောက်တောင်ပဲ မုန်းတီး သွားပြီလား။ ဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကသိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေလေဗျာ။ အဲ့လိုစကားတွေ မပြောပါနဲ့ဗျာ။ ဆရာလေးမုန်းသွားမှာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးပါ။ ဆရာလေးကို ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တယ”်
”ဟား…………………….ရယ်ရတယ်။ ငါ့အရွယ်က ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးကွ။ ဒဏ်ရာ ရသွားတဲ့ ကျားနာတစ်ကောင်ကသာမန်ကျားတွေထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ မင်းသိပါတယ်နော်။ မင်းကိုရှင်းရှင်းပဲ
ပြောမယ် မင်းနဲ့ငါနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ဒီမှာပဲ ရေစက်ကုန်ြပီလို့သတ်မှတ်လိုက်။”
သူ့မျက်လုံးမှ မျက်ရည်တွေကျလာသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို တစ်ချက်စူးစူးကြီး ကြည့်လိုက်သည်။ သူသိပ်ြပီးသရုပ်ဆောင်ကောင်း လွန်းသည်။ သူ့အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ရသည့် ကျွန်တော့်မေတ္တာ တွေသူနဲ့ ပက်သက်ခြဲ့ပီး လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ခဲ့ဖူးသည့် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးတွေ အခုချိန်မှာ တော့သဲထဲရေသွန်ပျောက်ကွယ်သွားချေပြီ။ အံတင်းတင်းကျိတ်ထားသည့် ကျွန်တော့်ပါးစပ်တွေ
မေးရိုးကျောကြီးတွေ ထောင်ြပီး မျက်နှာ ကြီးက လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကျောခိုင်းကာ ချာကနဲ လှည့် ထွက်ရန်ြပင်လိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် သူကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲထားသည်။ ကျွန်တော်သူ့ လက်ကို ဖြုတ်လိုက်ကာ ဆိုင်ကယ်ကို ဆက်နှိုးပြီးဝူးကနဲမောင်းထွက်လာခဲ့သည်။
ယခုတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ကြီးသည် စုတ်ြပက်နေအောင် ကျဆုံးသွားချေပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်တွေအကြီးမားဆုံးစော်ကားမြှုကီးနှင့် ကြုံတွေ့လိုက်ရပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကို ထားကာအဝေးသို့ထွက်ပြေးသွားလေသည်။ အစွန့် ပစ်ခံကျွန်တော့်အသည်းတွေသည် ဟောင်းနွမ်နေသည့်ရော်ရွက်ဝါတွေလို နွမ်းကြေနွမ်းခြောက်နေလေ၏။ ကျွန်တော်သူ့ကို နာနာကျည်းကျည်းပြောခဲ့မိသည်။
သို့ပေမယ့် ကိုယ်အချစ်ဆုံးသူတစ်ယောက်မိုလို့ သူကိုပြောခဲ့မိသည့် စကားတွေကကျွန်တော့်ရင်ကိုလည်း လာရောက်ထိမှန်သည်။ သူ့မျက်ရည်တွေကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသည့်အချိန်တွင် ဖော်မပြတတ်သောခံစားမြှုကီးနှင့်အတူ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲအသက်ရှင်ရပ်တည်နေရသလို ရင်ထဲတွင်ဝမ်းနည်းပက်လက် နှင့်စိုးရွံ့အားငယ်မိသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပါးပြင်လေးကို ကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်မိသည်။ စွတ်စြိုပီးပူနွေးနေသည်။ ဆောက်တည်ရာမရသည့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံ တွေကလည်း ကျွန်တော့်ကိုအရူးအမူးရိုက်ခတ်နေသည်။ မာနနှင့်သိက္ခာ ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ကျွန်တော်သူ့ကို မုန်းတီးပြလိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အလွမ်းတွေကိုတော့ ကျွန်တော်မကုစားနိုင်ပါ။ အချစ်အတွက်နဲ့ အရာရာကို စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ဖို့ တည်ဆောက် ထားသည့် ကျွန်တော့်ရဲ့အနာဂတ်ဘ၀တွေသည် ယခုတော့ တစ်စစီတစ်စစီ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရချေပြီ။ အချစ်နဲ့ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ချင်သည့် ကျွန်တော် အချစ်ကိုအရူးအမူးကိုးကွယ်ခဲ့သည့် ကျွန်တော် အချစ်ရဲ့ချိုမြိန်သည့် အဆိပ်တွေကို စားသုံးရင် အဆိပ်တက်မှန်းမသိ တက်နေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တော်တော်လေးတုံးပါသေးသည…် …………………။
အိမ်ရောက်တော့ အမေ့ကို အထုပ်တွေပေးလိုက်ပြီး ကျွန်တော့် အိပ်ခန်းထဲ ဒါရိုက်ဝင်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်အခန်းတံခါးကို ပိတ်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့စိတ်ရှိလက်ရှိလှဲ ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ခေါင်းအုံးအောက်တွင် ရှိသည့် ကျွန်တော့် ဖုန်းလေးကို ထုတ်ြကည့် လိုက် သည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပါပင် သူကျွန်တော့်ကို ဖုန်းတွေခေါ်ထားသည်။ 15 missed call တောင်။ ကျွန်တော်ဖုန်းကို သွက်လက်စွာ နိုပ်လိုက်ပြီး သူ့ နာမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို delete လုပ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ဖုန်းကို ဘက်ထရြီဖုတ်ကာ စာကြည့်စားပွဲခုံပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။
ကျွန်တော်မျက်နှာကြက် ကို ကြည့်ရင်းသက်ပြင်းချမိသည်။ ဟူး …………………
စာသင်ချိန်တစ်ချိန်ြပီးဆုံးသွားသောအခါဆရာက ကျောင်သားတွေကို ခဏအနားပေးလိုက်သည်။ ကျောင်းသားများသည် စကားပြောသူ ပြော မုန့်စားသူစားဖြင့် အဆောင်ထဲတွင် ဟိုဟိုသည်သည်ထိုင်နေ ကြ၏။ ကျွန်တော် လက်ထဲမှ စက္ကူဘူးလေးကို ကိုင်ြပီး ဟြိုကည့် သည်ြကည့်လုပ်ကာလမ်းလျှောက်လာသည်။ ထို့ နောက် အဆောင်မှ gudie ဆရာမလေးထိုင်နေသော နေရာသို့ရောက် သောအခါ ဘူးလေးကို စားပဲခွုံပေါ်သို့ အရင်ချလိုက်သည်။ သူမသည် စက္ကူဘူးလေးကိုမြင်သောအခါ ခေါင်းမြော့ကည့်လာသည်။
”ကြားသားမိုးကြိုး……………ချစ်ရဲအောင်။ နင်ငါ့ကို မုန့်ကျွေးတယ်ဟုတ်လား။ ဘာလဲထီပေါက်လာလို့လား ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက် ရင်း ပိုက်စံကောက်ရလို့လား ထူးထူးဆန်း ဆန်း ”
”မဟုတ်ပါဘူးဟာ …………..ဟို………………..ဟိုလေ………ငါ…………ငါနင့်အတွက်ပဲ လမ်းကနေတမင်ဝယ်လာတာဟ….စားနော် ……စားမယ်မဟုတ်လား”
ကျွန်တော်သူမကို ပြန်ဖြေလိုက်ြပီး စားပဲခွုံတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ သူမကတကယ့်ဝါရင့်ဆရာမကြီးဟန်ဖြင့် လက်ထဲမှကိုင်ထားသော မှင်နြီကီးကို ချကာ စစ်နေသော စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကို မျက်မှန်ကိုင်းပင့်ကာ ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်နည်းနည်တော့
ရှိန်းတိန်းတိန်းဖြစ်သွားသည်။ သူမက ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီးနောက် မုန့်ဘူးကိုလည်း မယုံသလိုကြည့်ပါသေးသည်။ ထို့ နောက် ဦးခေါင်းပြန်မော့လာသည်။
”ကောင်းပြီလေ စားရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နင်ငါ့ကို ဘာလို့ကျွေးတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပြောရလိမ့်မယ”်
ကျွန်တောင် ခေါင်းကုတ်မိသည်။ အရေးထဲသူမက စားစရာရှိတာကို မစားပဲ အရစ်ရှည်နေသေးသည်။ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ သူမကို ကျိန်ဆဲပစ်လိုက်သည်။
”………..ဟိုလေ…………နင့်ကိုစားစေချင်လို့ပေါ့ နင်ကလည်း ”
”သြော် ……..နင်ကလည်း သ…ံ ………သံယောဇဉ်ရှိလို့ပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ ”
ကျွန်တော့်အဖြေစကားကြောင့် သူမက ညုတုတုလေးလုပ်ကာ ခေါင်းလေးငုံ့သွားသည်။ ကျွန်တော်မျက်နှာ တစ်ချက် မဲ့လိုက်မိသည်။ စိတ်ထဲတွင်တော့ ဟာတာတာဖြစ်နေသည်။ ထို့နောက်သူမကခေါင်းပြန်မော့လာကာ မုန့်ဘူး ကို ဆက်ကနဲယူလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို သွားဖြဲပြကာ အထဲမှ မုန့်တွေကိုအားရပါးရစားပါတော့သည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုံ့မိသည် သူမကျွန်တော်ကို
ကြည့်လာသောအခါ စပ်ြဖဲဖြဲမျက်နှာ ဖြင့် ပြန်ရယ်ပြလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပါပင် အစားကိုပလုပ်ပလောင်းစားတတ် သည့် သူမက ထုံးစံအတိုင်း မုန့်တွေကို ပဖြဲနဖြဲထိုင်စားပါတော့သည်။
သူမ ၏နှုတ်ခမ်းတွေတွင်လည်း မုန့် ခရင်အနှစ်တွေအနည်းငယ်ပေလာသည်။ ကျွန်တော်လိုချင်သော အခြေအနေတစ်ခု ရပြီမို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ ဇင်မင်းသူတစ်ယောက် စာသင်ခန်းထဲမှ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကိုင်ကာထွက်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ အနားသို့ ရောက်ခါနီးသောအခါ ကျွန်တော်အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်သည်။
”ကောင်းတာပေါ့ အရမ်ကောင်းတယ်။ မုန့်အထဲထဲက ချောကလက်အနှစ်တွေကပိုစားလို့ကောင်းတယ်သိလား”
”ဟုတ်လား ဂျူးစားချင်ရင် နောက်နေ့ကျရင်လဲ ထပ်ဝယ်ကျွေးဦးမယ်လေ။ နေ့တိုင်းစားချင်ရင် နေ့တိုင်းဝယ်ကျွေးမယ် တစ်သက်လုံး စားချင်ရင် တစ်သက်လုံးဝယ်ကျွေးမယ်သိလား”
ကျွန်တော်မျက်လုံးကို အနည်းငယ်စောင်းပြီး နဘေးသို့ငြဲ့ကည့်လိုက်သည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပါပင် ဇင်မင်းသူက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို တောင့်တောင့်ကြီးရပ်ြပီး ငေးကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်တစ်ချက် မခို့တရို့ ပြုံးလိုက်ကာ အရှေ့မှ မုန့်စားနေသော guide ဆရာမလေးကိုပြန်ြကည့်လိုက်သည်။
”ဂျူးရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ မုန့်တွေပေနေတယ် ကျွန်တော်သုတ်ပေးမယ်နော”်
ကျွန်တော်ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူမနှုတ်ခမ်းစတွင်ပေနေသော မုန့်ခရင်အနှစ်တွေကို အသာ တစ်ရှုးစဖြင့်လှမ်းသုတ်ပေးလိုက်သည်။ သူမက ကျွန်တော်ကို ရှက်စနိုးလေးဖြငြ့်ကည့်ကာအသာမျက်လွှာ လေးချထားလေသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
သတ်သေချင်စိတ်တွေပေါက်လောက်အောင်ခံစားနေမိရသည်။ သို့ပေမယ့် ကလဲ့စားချေလိုစိတ်ရှိနေသည်မို့လည်း အောင့်အီး ပြီး သည်းညည်းခံကာလုပ်လက်စအလုပ်ကို လက်စသတ်လိုက်သည်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်သူမကို သုတ်ပေးပြီးသောအခါ ဇင်မင်းသူဖက်သို့
အသာငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်သည်။ သူကျွန်တော့်ကို စူးစူးကြီး စိုက်ြကည့်ကာ တောက်တစ်ချက်ခေါက်ြပီး စာသင်ခန်း ထဲသို့ ပြန် ၀င်သွားသည်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာရပြီမို့ မြဲ့ပုံြး့ပုံးလိုက်မိသည်။
”ချစ်ရဲအောင် ဘယ်သွားမလို့ လဲဟင”်
”ဟိုလေ………….ငါ့ကိုလေ ဒီကပြန်ရင်ဈေးလိုက်ပို့ပါလားဟင်။ ငါဝယ်စရာနည်းနည်းရှိလို့”
”နင့်မှာ ခြေထောက်မပါဘူးလား ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သွားပါလား”
ကျွန်တော်ပြောပြီးသည်နှင့် ဆက်ကနဲထပြန်လာခဲ့သည်။ သူမကနောက်နေပွစိပွစိ ပြောပြီး ကျန်ခဲ့သည်။ကျွန်တော်ရယ်ချင်စိတ်ကို မျိုသ်ိပ်ထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ကို ” အခုတစ်မျိုးတြော်ကာတစ်မျိုးနဲ့အရူး ” တဲ့။
ညခင်းလေးသည် လှပနုပျိုနေသည်။ အပြင်ဖက်တွင် မိုးဖွားလေးတွေ ကျဆင်းနေသည်။ကောင်းကင်ြကီးတစ်ခုလုံးကလည်း မဲမှော င်နေသော တိမ်သားဆိုင်တွေဖြင့် ပြည့်နှက်နေလေသည်။ထိုတိမ်တိုက်အုပ်ြကီးတွေ ကြားထဲတွင် တစ်ခါတစ်မှပေါ်လာတတ်သော လမင်းလေးကခဏတာမျှလင်းနေပြီး မကြာမီအတွင်းမှာ ပဲ တိမ်မြဲကီးတွေ အုပ်မိုးသွားသဖြင့် ပြန်လည်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးသည် စိုစွတ်နေပြီး ငြိမြ့်ငိမ့်ငြောင်းငြောင်းရှိလှသည်။ အဝေးမှသီချင်းသံသဲ့သဲ့လေးကလည်း ပြန့်လွင့်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြတ်သန်းခုတ်မောင်းသွားသည့်ထွေလာဂျီသံများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလံုး ခဏတာမျှ ဆူညံသွားတတ်သည်။ ပြီးတော့ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။
မိုးရေတွေ စိုစွတ်နေသည် ခြံထဲကို ကျွန်တော် ပြတင်းပေါက်မှ ငေးကြည့်နေမိသည်။ ပြတင်းပေါက်မှ ဖြာထွက်နေသော လျှပ်စစ်မီး ရောင်ကြောင့် အနားရှိသစ်ပင်ငယ်လေးတစ်ချို့ကို သည်းသည်းကွဲကွဲမြင်နေရသည်။ အရင်ညတွေက သည်လိုအချိန်မျိုးဆိုလျှင် သူနှင့်ကျွန်တော် အတူတူရှိနေလောက်မည်။သူကစာကျက်နေမည်။ ကျွန်တော်က သစူာကျက်တာကို ဘေးနားမှထိုင်ပြီး ငေးကြည့်နေမည်။ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်တွင် သူခေါင်းအုံးကာ ကျွန်တော်ဆိုပြသောသီချင်းကို နားထောင်တတ်သည်။ ကျွန်တော်က သူ့ဆံပင်လေးတွေကို ဖွဖွလေးနမ်းရှိုက်ကာပွတ်သပ်ပေးနေမည်။ သူနှင့်ကျွန်တော်ရဲ့ အမှတ်တရညတွေသည် မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလွန်းပြီး သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းခဲ့သည်။ ယခုဆိုလျှင် သူနှင့်ကျွန်တော်အတူမရှိနေတော့သည်မှာ ဆယ်ရက်ကျော်နေပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သူ့ကို လွမ်းသည်။ နှစ်နှစ်ကာကာကြီးကို လွမ်းမိပါသည်။ အတိတ်ကသတိရစရာဖြစ်ရပ်တွေက ယခုလိုလွမ်းမောဖွယ်ရာ အချိန်မျိုးတွင် ကျွန်တော့်ကိုမျက်ရည်ကျအောင်နှိပ်စက်ပါတော့သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် သောကတွေ ထောင်သောင်းမက ၀င်ရောက်နေရာယူနေသည်။ သူကော။ ကျွန်တော့်ကို သတိရမှရပါ့မလား။
လွမ်းလို့တော့မသေနိုင်ပေမယ့် သူ့ကိုကျွန်တော် သေလောက်အောင်လွမ်းနေမိသည်။ သူ့ကိုကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲတွင် ထဲ့ထားချင်ပြီး သူ့လက်ကလေးတွေကို ယုယစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားချင်သည်။ကျွန်တော်တို့ ၏ ချစ်ြခင်းတရားသည် အမုန်း၏ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်ကို ရောက်ရှိသွားကာ မုန်တိုင်းမြိပီးနစ်ြမုပ်သေဆုံးသွားပြီလားမသိပါ။ စိတ်မကောင်းခြင်းတွေသာ အချိန်တိုင်းကြီးစိုးပြီး ရင်တွေတရှရှ ကွဲနေမိသည်။ တစက် ယ်ဆိုလျှင်ကျွန်တော်သူ့ကို သိပ်ချစ်ပါသည်။ ချစ်သည်မှ အသက်မကချစ်သည်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်သူ့ကို
ချစ်သည့်အချစ်ကို သူတစ်ပါးပေါ် မျှဝေပေးနိုင်လောက်သည် အထိတော့ကျွန်တော်သဘောထားမကြီး နိုင်ပါ။ သ၀န်တြိုခင်းက မြတ်နိုးခြင်နှင့် ချစ်ခြင်းအပေါ်ကိုကျော်ဖြတ်အနိုင်ယူကာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို အစိမ်းလိုက်ကွဲကြေအောင်
”ဒေါက…် ………ဒေါက…် …………..ဒေါက…် ………………….သားအိပ်နေပြီလား”
အခန်းအပြင်ဖက်မှ အမေ့သံကြားရသဖြင့် ကျွန်တော် မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပစ်လိုက်ကာပြန်ဖြေလိုက်သည်။
”မအိပ်သေးဘူးအမေ………………..၀င်ခဲ့လေ အခန်းတံခါးက စေ့ရုံပဲစေ့ထားတာ”
ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့ အမေက အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာသည်။ကျွန်တော်ဟန်မပျက်အောင် အိနြေ္ဒဆည်လိုက၏် ။ အမေက ကျွန်တော့်နားသို့ မတ်တတ်လာရပ်သည်။ထို့နောက် ကျွန်တော့်ပခုံးကို လာကိုင်ပါသည်။
”သား ဘာလို့ ထမင်းမစားတာလ”ဲ
”မဆာသေးလို့ ပါ အမေ”
”အခုညရှစ်နာရီ ရှိနေပြီ ဗိုက်မဆာဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ သားကိုအမေကြည့်နေတာ ကြာပြီသားအခုတစ်လော ညှော င်နာနာနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ဟိုကောင်လေးအိမ်ကိုလည်းမသွားတော့ဘူး။ အစားလဲကောင်းကောင်းမစားဘူး အရင်က အမေ့သားက ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကဲပြောသားမှာ ဘာတွေ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ရှိနေလ”ဲ
ကျွန်တော်အမေ့ကို မြော့ကည့်လိုက်မိသည်။ အမေ့မျက်နှာ တွင် ကျွန်တော့်ိကို စိုးရိမ်သည့်ကရုဏာမျက်ဝန်းတွေကို တွေ့ ရသည်။ ကျွန်တော်အမေ့ကို ခါးမှဖြတ်ပြီး ဖက်လိုက်သည်။ မငိုမိအောင်လဲမနည်းအံကျိတ်ပြီးထိန်းထားမိသည်။
”သားရယ…် ……………..အမေကသားကိုမွေးထားတဲ့အမေလေ။ ငါ့သားလေး မျက်နှာ ကိုအမြဲတမ်းအရိပ်တကြည့်ကြည့်လုပ်နေတာ။ သားလေးမျက်နှာ တစ်ချက်ညှိးသွားတာနဲ့အမေချက်ချင်းသိတယ်။ သားအခုလို ခံစားနေရတာ အမေ့ကိုမှ မပြောရင် သားဘယ်သူ့ကို
သွားပြောမလဲ။ သားမှ အမေ့ထက်ပြိုပီး အားကိုးစရာ တိုင်ပင်စရာလူရှိသေးလို့လားသားရဲ့”
”အမေရယ် သား…………………….သား………ခံစားနေရတာလေ အမေ့ကို ပြောပြလို့မရဘူးအမေရဲ့။သားလေ ယောကျာ်းတန်မဲ့နဲ့ အသည်းနုလွန်းတယ်အမေ။ အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့သားကိုသားလဲ မကြိုက်ဘူး။သားကယောကျာ်းပဲ အမေရယ် သားဘာမဆိုခံနိုင်ရည်ရှိရမှာ ပေါ့။ ဒါပေမယ့်အမေရယ…် ………………”
ကျွန်တော်အမေ့ကို ဖက်ပြီးငိုကြွေးမိပါသည်။ အမေက ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကိုင် ပြီးပွတ်သပ်ပေးသည်။
”သားဟာ ယောကျာ်းလေးပဲ ဖြစ်ြဖစ် မိန်းကလေးပြဲဖစ်ြဖစ် အသည်းပဲနုနုအသည်းပဲ မာမာသားဟာအမေမွေးထားတဲ့ အမေ့ရဲ့ သားပဲလေသားရဲ့။ သားလေးအခုလို ဖြစ်နေတေ့ာအမေဘယ်စိတ်ကောင်းပါ့မလဲသားရယ်။ ခက်တော့တာပဲသားရယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့လဲမပြောဘူး သားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကို အမေက ဘာမှမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးလို့ ရမှာ လဲသားရဲ့”
”မဟုတ်ဘူးအမေ……………………..သားကိစ္စက အမေလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ နှလုံးသားကိစ္စပါအမေ။ သားအခုအရမ်းဝမ်းနည်းတယ် အမေရာ။ ”
အမေ့ကို ဖက်ြပီးတရှုံ့ ရှုံ့ငိုကြွေးနေသော ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ကာ အမေသက်ပြင်းချသည်။
အပြင်ဖက်မှ ခေါ်သံထွက်လာသည်။ ကျွန်တော်အမေ့ကို ဖက်ထားရာမှ ခွာ လိုက်ြပီး ပြတင်းပေါက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သ…ူ …………………သ…ူ …………………ကျွန်တော့်ဆီကို လာသည်။ ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကို လက်မောင်းဖြင့်သုတ်လိုက်ပြီး ပြတင်းပေါက်တံခါးကို ထစေ့လိုက်သည်။ အမေကကျွန်တော့်ကို ထူးဆန်းသလြိုကည့်သည်။
”သား အပြင်ဖက်က ဟိုကောင်လေးမိုလား အမေတံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်ရမလား”
”မဖွင့်နဲ့အမေ သားသူ့ကို မတွေ့ ချင်ဘူး ”
”ဘာဖြစ်လို့လဲသားရဲ့ သားနာမည်ကိုခေါ်နေတဲ့ဥစ္စာ သားကိုတွေ့ချင်လို့နေမှာ ပေါ့။ ”
”သူသားကိုတွေ့ ချင်နေရင်လဲ သားသူ့ကိုမတွေ့ချင်ဘူးအမေ သူ့မျက်နှာ ကို ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူး”
”သားတို့ ချင်းဘာတြွေဖစ်ထားကြတာလဲသား ရန်ြဖစ်ထားတာလား။ အမေတစ်ခုပြောမယ်နော်သား။သားတို့ ချင်းဘာတွေပဲ ဖြစ်ထားကြ ဖြစ်ထားကြ အမေ့ရှေ့မှာ တော့ စိတ်မချမ်းသာစရာမြင်ကွင်းတွေအမေမမြင်ချင်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားသူ့ကို တံခါးဖွငြ့်ပီး သွားတွေ့လိုက်ပါ အမေဘုရာရှိခိးု လိုက်ဦးမယ”်
အမေက ပြောပြောဆိုဆြိုဖင့် ကျွန်တော့်အနားမှထွက်သွားသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို တွေ့ရမှာရင်တုန်နေသည်။ မတော်လို့ အမေ့ရှေ့မှာ များ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ြကားကကစ္စိတွေပြောချလိုက်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မည်။
”ဆရာလေး ထွက်လာဗျာ……………..အခုထွက်လာ ဆရာလေးထွက်မလာရင် ကျွန်တော်ဒီကမပြန်ဘူးနော”်
”ဆရာလေး တံခါးဖွင့် …………….ဆရာလေး”
ကျွန်တော်အခန်းထဲတွင် ငြိမ်သက်ရင်းစဉ်းစားနေမိသည်။ သူ့ကိုတံခါးဖွင့်မပေးလျှင် ပြန်မည့်ပုံမပေါ်ပါ။ ”ဒေါက်…………….ဒေါက…် ………….ဒေါက် …..သားဘာလုပ်နေတာလဲ တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်လေ”
အခန်းအပြင်ဖက်မှ အမေကပါ အော်နေသဖြင့် ကျွန်တော် အခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ခြံတံခါးနားသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ခြံတံခါးရှေ့သို့ရောက်သော် သူက သံတံခါးကိုအချုပ်သားတစ်ယောက်လို ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်လက်ထဲမှ သြော့ဖင့်ခြံတံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ တံခါးဖွငြ့်ပီးပြီးချင်း သူ့အပြုအမူကြောင့် ကျွန်တော် ရင်ထဲနွေးကနဲဖြစ် သွားသည်။ သူကျွန်တော့်ကို အတင်းလာဖက်သည်။ ကျွန်တော့်ကို တင်းကြပ်နေအောင်ဖက်ထားသည်။ ကြာတော့ ကျွန်တော်ပင် အသက်ရှုကြပ်ချင်လာသည်။ ကျွန်တော်သူ့လက်တွေကို ဖြုတ်ချလိုက၏် ။ သူအြံ့သသောမျက်နှာ ဖြင့် ကျွန်တော့်ကြိုကည့်သည်။
”ဆရာလေးရယ်……………..ကျွန်တော်ဆရာလေးကို ဘယ်လောက်တောင်သတိရနေတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လွမ်းနေတယ်ဆိုတာ သိရဲ့လား။ ဆရာလေးအရမ်းရက်စက်တာပဲဗျာ။ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့လဲ မကိုင်ဘူး။ အဆောင်မှာ တွေ့ရင်လည်း စကားမပြောဘူး။
ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိခံစားနေလဲ ဆရာလေးသိလား။ ဆရာလေးကျွန်တော့်ကို မချစ်တော့ဘူးလားဟင”်
”ဆရာလေးရယ်…………ကျွန်တော်လေ………..ဆရာလေးကို မခဲနွိုင်ဘူး။ ကျွန်တော် ဆရာလေးကိုသိပ်ချစ်တယ် ကျွန်တော့်ကို မရက်စက်ပါနဲ့ဗျာ.။ ကျွန်တော် အနူးအညွှန့်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ နော”်
”မင်းတော်တော်ရယ်ရတဲ့ကောင်ပဲ အချစ်ကိုမင်းက ကလေးကစားစရာများမှတ်နေလား။ ငါကကောမင်းကစားချင်တိုင်း ကစားလို့ရမယ့် အရုပ်လား။ သွားစမ်းပါကွာ ပြန်ပါတော့။ မင်းကို မြင်ရတာ ဒေါသလဲထွက်တယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်။ ပြန်ပါတော့ကွာ ”
ကျွန်တော့်ဆီကစကားတွေကို သူမယြုံကည်နိုင်သည့် မျက်လုံးတြွေဖင့်နားထောင်နေသည်။သူ့မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တွေသည် ပါးပြင်မှ တစ်ဆင့်တစ်လိမ့်လိမ့် စီးဆင်းလာသည်။ သူ့ကြိုမင်တော့ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်လည်း နာကျင်ကြေကွဲထိခိုက်လာသည်။ ကျွန်တော်မငိုမိ အောင်သတိထားနေမိသည်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်မကျအောင် ကျွန်တော်ကျိတ်ခံထားသည်။
စောစောက မဲမှော င်နေသော တိမ်မဲတွေသည် မိုးတွေအဖြစ်မြေပြင်ပေါ်သို့ ကျဆင်းလာလေသည်။ မိုးများအပြင်လေများပါ ရော၍တိုက် ခတ်လာသည်။ လျှပ်စီးတွေကလည်း ဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲလင်းလက်လာသည်။ များပြားလှသော မိုးသီးမိုးပေါက်တွေသည် တစ်စတစ်စ မြေပြင်ပေါ်သို့ပိုမိုကျဆင်းလာလေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမိုးသံတွေဖြင့် ဖုန်းလွှမ်းသွားလေသည်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ တွင်လည်း မိုးရေတွေ ရွှဲရဲစွှိုလာသည်။ ထို့အတူ ဇင်မင်းသည်လည်း ရွှဲနစ်နေသည်။
”ဆရာလေးရယ် ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ကောင်မလေးကလေ ကျွန်တော့်အမကြောင့် ဖြစ်သွားတာပါ။တကယ်တော့ ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်မ၀င် စားပါဘူး။ ကျွန်တော့်အမနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်စတွေ့ရာကနေ သူ့ ဖက်ကစပြီး ကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ အဲ့တုန်းကကျွန်တော်က အပျင်းပြေအပျော်သဘောမျိုးနဲ့ တွဲဖို့သူနဲ့ ရည်းစားတွေလုပ်ခဲ့တာပါ ဆရာလေး။ဒါတွေအားလုံးကလည်း ဆရာလေးနဲ့ မတွေ့ခင်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးကိုဖြတ်ဆိုရင်ြဖတ်ပါ့မယ် ဆရာလေးရယ် ကျွန်တော့်ကိုတော့ မရက်စက်ပါနဲ့နော်။ ဆရာလေးကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်မိုလားဟင”်
မိုးရေထဲတွင်တတွတ်တွတ်ပြောနေသော သူ့စကားတွေကို နားထောင်ရင်းကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲလာသည်။ ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ငိုမိသွားသည်။ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေသည် မိုးစက်တွေနှင့်အတူ ရောပြွန်း ပျောက်ကွယ်သွား သည်။ကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်နေရင်း ခြေမခိုင်ချင်တော့သလြိုဖစ်လာသည်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးသည်အားအင်ချိနဲ့ကာယိုင်လဲတော့မည့် အလားမနည်းထိန်းထားရသည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ြကားတွင်အကြားကြီး ငြိမ်သက်မှုက ကြီးစိုးနေသည်။ မိုးသံလေသံတွေဖြင့်သာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုးံ
ဆူညံနေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကျောခိုင်းထားပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်စိတ် ဒုန်းဒုန်းချလိုက်ြပီးသူ့ဖက်သို့လှည့်လိုက်သည်။ မြင်လိုက်ရသည်မြင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်တော့်အံအားသင့်ကာမျက်လုံးတြွေပူးသွားသည်။ သ…ူ……………….သူ…………………….မိုးရေထဲ တွင်လဲနေသည်။
ကျွန်တော်သူ့ကိုအပြေးပွေ့ထူလိုက်သည်။ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်တစ်ခုလုံး မြေကြီးမှရွှံ့တြွေဖင့်ပေနေသည်။ကျွန်တော်သူ့ကို လှုပ်ခတ်ြပီး နှိုးကြည့်သည်။ သူ့မျက်လုံးပိတ်ကာ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲတွင်ငြိမ်သက်နေသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် လှိုင်းတပိုးတြွေပင်း ထန်လာသည်။
သူလုံးဝမလှုပ်တော့။ သူကျွန်တော့်လက်ထဲတွင် ဇက်ကျိုးကာငြိမ်သက်သွားသည်။
မိုးတွေတဖွဲဖွဲကျနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလံုး ကျွန်တော့်အော်သံတွေဖြင့်သာ ဖုံးလွှမ်း သွားသည်။
ဆေးရုံအခန်းလေးထဲတွင် သူလဲလျောင်းနေသည်။ ကျွန်တော်သူ့လက်ကလေးကိုကိုင်ကာသူ့ကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ သူနှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေသည်။ လက်ဖျံတွင် ချိတ်ထားသောဆေးပုလင်းမှ ဆေးရည်တွေက တစ်စက်စက်ကျကာ သူ့လက်မောင်းသွေး ကြောထဲသို့စီးဝင်သွားလေသည်။ခဏကြာတော့ နပ်စ်မလေးအခန်းတစ်ယောက်အခန်းထဲသို့ ၀င်လာသည်။ ထို့ နောက် ချိတ်ထား သောဆေးပုလင်းကို ကြည့်ကာလူနာကိုတစ်ချက်ြကည့်ပြီး ပြန်ထွက်ရန်ြပင်လိုက်သည်။
“ဆရာမ…………..ခဏလေးနေပါဦး ”သူမကကျွန်တော့်အသံကြောင့် ရပ်တန့်သွားသည်။
”လူနာအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ သိချင်လို့ပါ”သူမကတစ်ချက်ပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကြိုကည့်သည်။ ထို့နောက်”လူနာကအားနည်းပြီး မေ့လဲသွားတာပါ။ အခုတော့ အိပ်ပျော်နေတယ်။ အခြေနေကိုသေသေချာချာသိရအောင် medical check-up လုပ်ြကည့်ပါလား။ တစ်ကယ်လို့ ခဏနေကျရင်ဆရာဝန်ြကီးလာမှ ဆရာဝန်ြကီးကို ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမေးကြည့်တာအကောင်းဆုံးထင်တယ်။ အခု ဆရာဝန်ြကီး က လူသိပ်မရှိတာနဲ့ အိမ်ခဏပြန်သွားတယ်။ခဏနေရင်လာပါလိမ့်မယ”်
ကျွန်တော့်ကြိုကညြ့်ပီး နပ်စ်မလေးက အပြင်ဖက်သို့ ပြန်ထွက်သွားသည်။နပ်စ်မလေးထွက်သွားသည်နှင့် အခန်းထဲကို လူသုံးယောက် ထပ်ဝင်လာသည်။ အသံတွေကြောင့်ကျွန်တော် တခါံးဝကို ကြည့်လိုက်မိသည်။
”သား…………သူသူ ..သားဘာဖြစ်တာလဲဟင…် …………ဦးရဲ့သားဘာဖြစ်သွားတာလ”ဲ
သူတို့ သုံးယောက်လုံးဝင်လာသည်နှင့် အခန်းတစ်ခုလုံးဆူညံသွားသည်။ သုံးယောက်လုးံ ကုတင်နားသို့ယောက်လာကာ ဇင်မင်းသူ နားတွင် ၀ိုင်းနေကြသည်။
”ကျွန်တော်နပ်စ်မလေးကို မေးကြည့်ပြီးပါပြီ။ လူနာက အားနည်းပြီး မူးလဲသွားတာပါတဲ့။ အခုအားဆေးတစ်လုံးချိတ်ထားတယ် သူအိပ်ပျော်နေတယ”်
”မောင်လေးက အရင်က ဒီလောက်ထိမဖြစ်ဖူးပါဘူး။ ဘယ်လြိုဖစ်တာပါလိမ့်။ သူအားနည်းရအောင်လည်းသူ့မှာ ဘာရောဂါအခံကြီး ကြီးမားမားမှ မရှိပါဘူး။ နေ့လည်ကမှ သူ့ကိုအကောင်းကြီးတွေ့ပါသေးတယ်အခုဘယ်လိုလုပ”်
”သူအရင်က ဒီလြိုဖစ်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုသွားတုန်းက သူတစ်ခါမူး လဲဖူးတယ် ”
”သားသူသူက အခုတစ်လော အစားသိပ်မစားဘူးသားရဲ့၊ ညဆိုရင်လည်းသိပ်မအိပ်ဘူး ၀ရံတာမှာတစ်ယောက်ထဲငေးနေတတ်တယ်။ ဦးတို့ပေါ့လျော့တာလဲ ပါပါတယ်သားရယ်။သူ့ကိုဂရုမစိုက်အားဘူးဖြစ်နေတာ။ အခုလိုဖြစ်တာ ဦးတို့အပြစ်တွေလည်းပါပါတယ”်
”ဘယ်လ…ို ……….သားကြောင…့် ………ဟုတ်လား”
”ဟုတ်တယ်ဦး ခဏု တုန်းက သူနဲ့ကျွန်တော…် …………..ဟို………….မိုးရေထဲမှာစကားများကြရင်း …….သူအခုလြိုဖစ်သွားတာပါ ဦး”
”ဟုတ်သားပဲ သားတစ်ကိုယ်လုံးစိုရွှဲနေတာပဲ။ ”
”သား အမေအ၀တ်တစ်စုံ ယူလာတယ် လဲလိုက်ဦးလေ။ ခဏနေ နှာ စေးပြီးဖျားနေဦးမယ”်
အမေက ကျွန်တော်တို့ စကားဝိုင်းထဲကို ၀င်ပြောသည်။ ကျွန်တော် အမေ့လက်ထဲမှ အ၀တ်တွေကို ယူကာအခန်းထဲရှိ bathroom ထဲသို့ ၀င်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်အ၀တ်အစားလဲကာ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။
”သား…………..သားနဲ့ ဟောဒီက အမကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုညဥ့်နက်နေပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်ပဲအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ ပေးပါ့မယ်။ အပြင်မှာ ကျွန်တော့်ကားရပ်ထားတယ”်
ဇင်မင်းသူ၏အဖေက ကျွန်တော်နှင့်အမေ့ကို ကြည့်ပြီးပြောနေသည်။ အမေကတော့ ဘာမှမပြောပဲကျွန်တော့်ကို ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်ခေါင်းရမ်းလိုက်သည်။
”ကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူးဦး အမေ့ကိုပဲ အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ဦးတို့လည်းအိမ်ပြန်နားလိုက်တော့လေ။ ကျွန်တောဒ်ီမှာ အိပ်ပြီးစောင့်လိုက်ပါ့မယ”်
”ဖြစ်ပါ့မလားသားရယ် အားနာစရာကြီး ဒီမှာ ဦးတို့သားအဖနှစ်ယောက်ပဲ စောင့်လိုက်ပါ့မယ”်
”ရပါတယ်ဦး အားမနာပါနဲ့။ ဦးတို့က မနက်ကျရင်အလုပ်ကရှိသေးတယ်လေ။ ကျွန်တော်ကသိပ်ပြီးကိစ္စမရှိဘူး။ အဆောင်ကိုလည်း ဖုန်းဆက်ထားလိုက်မယ်။ ဦးတို့စိတ်ချလက်ချပြန်ပါဦး။”
”ဒါဆိုရင်တော့ သားကိုပဲဒုက္ခပေးရတော့မှာ ပဲ သားရယ”်
ထို့နောက် သူတို့သုံးယောက်ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်ြပီးပြန်သွားကြသည်။ သူတို့ပြန်သွားသည်နှင့်အခန်းက ပြန်လည်တိတ်ဆိတ် သွားပြန်သည်။ ကျွန်တော် လေတဖျက်ဖျက်တိုက်နေသောပြတင်းပေါက်တွေကို ထပိတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကုတင်နားသို့ ပြန်လာကာ ဇင်မင်း သူနားတွင်ထိုင်လိုက်၏။ ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တော့ ဇင်မင်းသူက တစ်ဖက်သို့အကျောဆန့်ကာ စောင်းသွားသည်။
ကုတင်ခြေရင်းတွင်ရှိသော ခြုံစောင်ကို ဆွဲကာကျွန်တော်သူ့ကို ခြုံပေးလိုက၏် ။ကျွန်တော်စောင်ခြုံပေးလိုက်တော့ သူကျွန်တော့်ဖက်ကို ပြန်လှည့်လာသည်။ သူ့မျက်တောင်လေးတွေတဖြေးဖြေးပုတ်ခတ်လာသည်။ သူနိုးလာပြီထင်သည်။
”ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မင်းမူးလဲသွားလို့။ ငါနဲ့မင်းနဲ့စကားတွေများနေရင်းတန်းလန်းမင်းမူးလဲသွားတယ်။ အဒဲ့ါကြောင့် မင်းကို ငါကုန်းပိုးပြီး ဆေးရုံကိုခေါ်လာတာ။ ငါ့အမေကမင်းအဖေနဲကအမကို ဖုန်းဆက်ြပီးခေါ်လိုက်တယ်။ ခဏု တုန်းက သူတို့ရောက် လာကြတယ်။မင်းကအိပ်ပျော်နေတော့ မင်း ကိုမနှိုးပဲ ဒီအတိုင်းပြန်သွားကြတာ”
”သြော…် …….ဟ…ို ………ဟ…ို …………ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ မူးလဲသွားတာလဲ ဆရာလေး”
”အင်း နပ်စ်မပြောတာတော့ အားနည်းလို့ နေမှာ တဲ့။ သူလည်းသေသေချာချာတော့ သိပုံမပေါ်ဘူး။ ဆရာဝန်ြကီးလာမှ သေသေ ချာချာစမ်းသပ်ြကည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင် မင်းကို medical check-up လုပ်ြကည့်တာပေါ့။ အခုတော့ အားဆေးပုလင်းချိတ်ထားပေးတယ”်
”ဆရာလေး …………ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်တယ်မိုလားဟင်။ ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးကိုမနက်ဖြန်ကျရင်ြဖတ်လိုက်မယ်လေ။ ကျွန်တော့်ကို အခုလိုစိမ်းစိမ်းကားကားကြီးမဆက်ဆံပါနဲ့နော်။ကျွန်တော့်ကို မမုန်းလိုက်ပါနဲ့ နော”်
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။ သူ့လက်ကလေးကို ကိုင်ကာဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် နဖူးထက် တွင်ဝဲကျနေသော သူ့ဆံပင်စတွေကို ယုယစွာ သပ်တင်ပေးလိုက်သည်။
”အဒဲ့ါတွေပြောမနေပါနဲ့ တော့ ညီလေးရယ်။ အကိုမင်းကို မုနုးလည်းမမုန်းရက်ပါဘူး။ အကိုမင်းကို ဘယ်တုန်းကမှ မမုန်းခဲ့သလို ဘယ်တော့မှလဲမုန်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညီနေကောင်းအောင်နေနော်။အကို့ကိုချစ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါခဏခဏ မဖျား စေနဲ့ကြားလား”
သူကျွန်တော့်ကို ကြည့်ကာ ပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်ြပသည်။ မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူ့အပြုံးလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲဆို့ နင့်သွားသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုသိပ်ပြီးရက်စက်သလြိုဖစ်သွားသည်။ ကျွန်တော် သိပ်ြပီးစိမ်း ကားသလြိုဖစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို
ဂရဏုာသက်စွာ ငုံ့ ကြည့်လိုက်ြပီး နဖူးလေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်ရောကုတင်ပေါ်တွင် တုံးလုံးလှဲကာ သူ့ကိုကျွန်တော့်လက်မောင်း၌ ခေါင်းအုံးစေလိုက်သည်။ သူကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲတွင် ငြိမ်သက်နေပြီး မျက်လုံးလေးမှေးစင်းထားသည်။
အပြင်ဖက်တွင် အရာအားလုးံ သည်တိတ်ဆိတ်နေလေသည်။ လမ်းမကြီးမှလမ်းမီးများလည်းပိတ်သွားကြပြီ။ လမင်းကြီးလည်း ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကောင်း ကင်ြကီးတွင်ကြယ်တွေကလည်း စုံညီစွာ လင်းလက်လာကြသည်။ ကျွန်တော်အခန်းမီးကို မှိတ်လိုက်ကာကုတင်အထက်မှ ညအိမ်မီးအပြာလေးကိုသာ ထွန်းထားလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူရော ပြတင်းပေါက်ကလမင်းကြီး ကိုကြည့်နေမိသည့် ကျွန်တော်ရောအိပ်ပျော်သွားပါတော့သည…် …………………။
ကျွန်တော်မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်လာသည်။ ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရသည်က ပြတင်းပေါက်မှန်မှစူးရှစွာ ထိုးနေသည့် တောက်ပနေသော နေရောင်စူးစူးကြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲ စူးနေသဖြင့်မျက်စိကိုအဆုံးထိမဖွင့်နိုင်သေးပဲ အသာမှေးပြီးတော့သာ ဖွငြ့်ကည့်ရသည်။ တစ်ညလုံးသည်ပုံစံအတိုင်းပဲ အိပ်ပျော်နေသဖြင့် ဇာက်တစ်ဖက်ညောင်းနေသည်။ အညောင်းပြေစေရန် ခေါင်းကို
ဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက် စောင်းထည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို မြှော က်ြပီးအကြောဆန့် မည်အပြု
ဘယ်ဖက်လက်မောင်းပေါ်တွင် ဇင်မင်းသူက အိပ်နေသဖြင့် ကျန်သည့်ညာဖက်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုသာ လေထဲသို့မြှော က်ကာ အကြောဆန့်လိုက်ရသည်။တစ်ကိုယ်လုံးလဲ အကြောအချဉ်တွေတင်းနေကာ ညောင်းကိုက်နေသည်။ ဇင်မင်းသူခေါင်းအုံးအိပ်
ကျွန်တော်အနည်းငယ် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားလိုက်သဖြင့် ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်တွင် အိပ်နေသောသူနိုးသွားသည်။ ပထမဦးဆုံး နိုးလာသည်နှင့် ကျွန်တော့်ကို ထူးဆန်းသလြိုကည့်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်တွင် အိပ်နေသော သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ဆန်းစစ်သည်။ ပြီးမှတစ်ခုခုကိုသတိရသွားဟန်ဖြင့် ပြုံးယောင်သန်းလာသည်။ သူဖြစ်ပျက်နေသမျှအမူအရာတွေအားလုံးကို
ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ် မျက်တောင်မခတ်ပဲ ငေးကြည့်နေမိသည်။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်၏အချောဆုံးအချိန်ကို မနက်ခင်းတွင်လည်းတွေ့ရတတ်သည်ပါလား။ မျက်နှာ မသစ်ရသေးသည့်မှုန်ဝါးဝါးမျက်နှာ လေးဖြင့် ရှုပ်ထွေးနေသော ဆံပင်တွေက တစ်မျိုးလေးဆွဲေ ဆာင်နေပြန်သည်။
ကျွန်တော်သူ့ကို အပြုံးဖြင့်ပြန်ြကည့်လိုက်သည်။ နံနက်ခင်းနှင့်အတူ လွငြ့်ပန်လာသောကြည်နူးမှုလေးတွေကို ကျွန်တော်အပြေး အလွှားဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်မိပါသည်။သူကခေါင်းကြွကာ ကုတင်ပေါ်သို့ ငုတ်တတ်ုထထိုင်သည်။ သူထထိုင်လိုက်မှ
ကျွန်တော့် လက်တစ်ဖက်ကို လှုပ်ကာကိုင်ြကည့်မိသည်။ လက်အံတွေသေနေပြီ။
”အိမ်ြပန်လို့ မရသေးဘူးလေ ညီလေးရဲ့။ မင်းကို ဒီနေ့ medical check-up လုပ်ြကလိမ့်မယ်။ မင်းရောဂါက ဘာလဲဆိုတာ သေသေချာချာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ရဦးမယ်လေ”
”ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ခေါက်ဆြွဲပုတ်ကျွေးဗျာ။ ဗိုက်ဆာတယ် မနေ့ညကတည်းကဘာမှမစားရသေးဘူး”
ကုတင်ပေါ်တွင်ထိုင်ြပီး ဗိုက်ကိုပွတ်ပြနေသောသူ့ကြိုကည့် ပြီးတစ်ချက် သနားသွားသည်။သူဘာမှမစားရသေးပဲကိုး ဆာနေရှာ ရောပေါ့။ သူနှင့်ကျွန်တော် အတူတူရှိစဉ်တုန်းကကျွန်တောက် သူ့ကို မနက်မိုးလင်းလာလျှင် အိပ်ယာနှိုးရသည်။ ထို့အပြင် မနက်စာစားဖို့ပါ
ပြင်ပေးရသည်။ တစ်ခါတစ်လေကျလျင်တော့ သူကစောနေတတ်ကာ ကျွန်တော့်အတွက်မနက်စာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးတတ်သည်။ သို့ ပေမယ့် သူပြင်ပေးသည်က စားလို့မရအောင်ဆားတွေငန်နေတတ်တာမျိုး၊ အချိုမှုန့် မပါတာမျိုး၊ ဖြစ်တတ်သဖြင့် သြူပင်ပေးသည့် မနက်စာဆိုလျှင်သိပ်တော့ မစားရဲချေ။
”ဒါဆိုရင် ခဏလေးစောင့် ခေါက်ဆွဲထုပ်တွေ အရင်ဆုံးသွားဝယ်ရဦးမယ်။ ပြီးရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဖို့ဒယ်အိုးနဲ့ hotplate လဲလိုသေးတယ်။ စားဖို့ ပန်းကန်လုးံ နဲ့တူလဲ မရှိဘူး။ ”
”မြန်မြန်လုပ်နော် ဆရာလေး ဗိုက်အရမ်းဆာနေပြီ။ အူတွေအသည်းတွေ သံစုံတီးနေကြပြ”ီ
”နာရီဝက်လောက်စောင့်။ မျက်နှာ လေးဘာလေးကြိုသစ်ထား၊ အဒဲီ့ဆေးခန်းက၀တ်ပေးထားတဲ့အ၀တ်စားကြီးကို မကြိုက်ရင် ဟိုအထုတ်ထဲမှာ ငါ့အ၀တ်စားအပိုတွေရှိသေးတယ် ယူဝတ်ထားလိုက်။ရေလဲချိုးချင်ချိုးထားလိုက်။ ငါသွားတိုက်မျက်နှာ သစ်ပြီးတာနဲ့
ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြီးသည်နှင့် Bathroom ထဲကို ၀င်ကာ မျက်နှာ အရင်သစ်လိုက်သည်။ ပြီးမှသွားတိုက်ကာ ပါးစပ်ကို ပလုပ်ကျင်း ပစ်လိုက်၏။ သွားတိုက်ရတာသိပ်တော့ စိတ်မချမ်းသာပါ။အိမ်သာကမုတ်ြကီးကို ကြညြ့်ပီးသွားတိုက်နေရသဖြင့် စိတ်ထဲတွင်
နည်းနည်းမသတီသလိုတြော့ဖစ်မိသည်။ ကျွန်တော်က ထိုသို့ အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်းတွဲထားတာမျိုးကို မကြိုက်ပါ။ ကိစ္စ၀ိစ္စ တွေပြီးသည်နှင့် မျက်နှာ ကို မျက်နှာ သုတ်ပုဝါဖြင့်သုတ်ကာအခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆေးရုံမျက်နှာ စာဖက်သို့လျှောက်လာခသဲ့ ည်။ ဆေး ရုံကပုဂ္ဂလိကဆေးရြုံဖစ်သဖြင့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် သားသားနားနား နှင့် အဆင့်မှီမှီတော့ရှိသည်။ ဆေးရုံမျက်နှာ စာကောင်တာ နားသို့ ရောက်သောအခါ မနေ့ညက နပ်စ်မလေးနှင့်တွေ့သည်။ နပ်စ်မလေးကကျွန်တော့်ကို တွေ့သည်နှင့် အပြုံးဖြင့်စတင်နှုတ်ဆက်သည်။
”ဘယ်လိုလဲ ရှင့်လူနာကိုပစ်ြပီးဘယ်သွားမလို့လဲ။ လိုအပ်တာရှိရင် ကျွန်မကိုပြောပါ။”
ကျွန်တော် ခပ်စစလေးပြုံးမိသည်။ သူမက စကားပြောတာပြတ်သည်ပဲ။ ”ကျွန်တော့်လူနာက နိုးနေပါပြီ။ ဗိုက်ဆာလို့ ခေါက်ဆြွဲပုတ်စားချင်တယ် ပူဆာနေလို့။အဲ့ဒါ…..အပြင်ကိုထွက်လာတာ”
”ခေါက်ဆွဲက ဘယ်လိုခေါက်ဆွဲမျိုးလဲ အသင့်စား ready make ခေါက်ဆွဲခြောက်ဆိုရင်တော့သွားဝယ်မနေနဲ့ တော့ ကျွန်မတို့နားနေဆောင်မှာ ရှိတယ်။ ခေါက်ဆွဲချက်တဲ့ electric potသေးသေးလေးလဲရှိတယ်။ အ…ဲ ……တစ်ြခားခေါက်ဆွဲဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ဆီမှာ မရှိဘူး ”
” သူစားချင်တာလဲ အဲ့လိုခေါက်ဆဲမျွိုးပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါက်ဆွဲဘယ်လိုပြုတ်ပေးရမလဲ စဉ်းစားနေတာ အခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီး ”
သူမက လက်ထဲမှ ဆေးစာရွက်တွေကို တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်ကာ ခေါင်းပြန်မော့လာသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြကာ
”anytime ပါပဲရှင်။ ဒါနဲ့…………….”
”လူနာနဲ့ရှင်နဲ့က ညီအကိုတွေလား။ သိပ်ချစ်ြကမယ့်ပုံတွေပဲနော်။ ညက ဆရာဝန်ြကီးရောက်လာလို့အခန်းထဲကို ၀င်လာကြည့်တော့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ပြီးအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပဲ ကျွန်မတို့လည်း ဘာမှမပြောတော့ပဲ ပြန်ထွက်လာကြတာ။ရှင်တို့ နှစ်ယောက်က ညီအကိုတွေဆိုရင်တော့ ချီးကျူးစရာကောင်းလောက်အောင်သိပ်ချစ်ြကမဲ့ပုံတွေပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လဲ တော်တော်သံယောဇဉ်ရှိမယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။မနေ့ညက ရှင်သူ့ကို ကုန်းပိုး လာတာ မိုးရွာ ကြီးထဲမှာ လေ”
ပါးစပ်က စက်သေနတ်ပစ်သလို တတွတ်တွတ်ပြောနေသော နပ်စ်မလေးကို ကျွန်တော်ငြိမ်ြပီးကြည့်နေမိသည်။
”sorry ကျွန်မ နည်းနည်းစကားများသလို ဖြစ်သွားတယ”်
”ရပါတယ် သိချင်ရင်တော့ ပြောပြရမှာ ပေါ့။ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က ဖအေမတူ မအေကွဲညီအကိုတွေပါ။တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အသက်မကချစ်ြကပါတယ်။ က…ဲ ………ကျွန်တော်ညီလေးဗိုက်ဆာနေတော့မယ် ထင်တယ”်
”နာနေဆောင်က ဒီဘက်မှာ ပါ။ ဒီဘက်ကို ကြွပါ”
ကျွန်တော်သူမပြသည့် ဘက်ကို လျှောက်လာခဲ့သည်။ သူမကတော့ အနောက်ကနေကျွန်တော်ပြောလိုက်သော စကားကို စဉ်းစားပြီးကျန်ခဲ့သည်။ သူမတိုးတိုးလေးရေရွတ်နေသည်။ ”ဖအေမတူ မအေက…ွဲ ….. . ဖအေမတူ မအေက…ွဲ ……………ဖအေမတူ မအေကွဲ”
”ဟင…် …………….........................ဒါဆို ဘာမှမတော်ဘူး ပဲ
ခေါက်ဆဲကျွက်သောအခါ ပန်းကန်းလုံးတစ်လုံးဖြင့်ထည့်ပြီး အောက်မှပန်ကန်းပြားတစ်ချပ်ဖြင့်ခံကာဇင်မင်းသူရှိရာသို့ မလာခဲ့သည်။ ခေါက်ဆွဲက စားချင်စရာ အငွေ့တွေတထောင်းထောင်း ထနေသည်။ဆေးရုံရှိ ကော်ရစ်တာအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ပြီး အခန်း ရှေ့ရောက်သော် အခါစေ့ထားသောတံခါးကိုအသာတံထောင်စစ်ြဖင့် တွန်းကာဝင်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သောအခါ
ကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေသော ဇင်မင်းသူကို အသင့်တွေ့လိုက်ရသည်။ မျက်နှာ သစ်ပြီးပုံပေါ်သည်။မျက်နှာ လေးက ဖြူနုနေကာ ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးဖြစ်နေသည်။ အင်းလေ နေမကောင်းသူဆိုတော့ဒီလောက်တော့ ရှိမှာ ပေ့ါ။
ကျွန်တော်သူ့ အနားသို့ထိုင်ကာ စားပွဲပေါ်သို့ ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကို တင်လိုက်သည်။ သူကကုတင်ပေါ်သို့ တပြင်ခွေထိုင်ကာ စားရန်အသင့်ပြင်သည့် အနေအထားလုပ်နေသည်။
”ဆာနေပြီ ဆာနေတာမှ ဗိုက်ထဲမှာ ၀ှီ….၀…ှီ ..၀ှီ……၀ှီ …….နဲ့။ ဆရာလေးကလည်းကြာလိုက်တာ”
”က…ဲ ……….ဆာနေပြီဆိုရင် အကိုခွံ့ ကျွေးမယ”်
သြူပုံးလာသည်။ ထို့ နောက်ကျွန်တော့်ကို ခေါင်းညှိတ်ပြသည်။ ကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကိုကိုင်လိုက်ကာ သူ့ အနားသို့ တိုးကပ်သွားလိုက်သည်။ ထို့နောက်ခေါက်ဆွဲေ တွကို တူနဲ့ညှပ်လိုက်ကာအသာမှုတ်လိုက်၏။
သူပါးစပ်ဟပေးသောအခါ အသာခွံ့ ကျွေးလိုက်သည်။ ထို့ နောက် ပန်းကန်ထဲရှိ ဇွန်းဖြင့် ဟင်းရည်ကိုခပ်ကာ အနည်းငယ်မှုတ်လိုက်ပြီး သူ့ကို တိုက်လိုက်သည်။ ဟင်းရည်ဇွန်းကို ပါးစပ်ဟမပေးသေးပဲသူကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေသေးသည်။
ကျွန်တော်ပြောလိုက်မှ သူပါးစပ်ဟပေးသည်။ သူကျွန်တော့်ကို ကြည့်သည့်မျက်လုံးတွေကမည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်နေမှန်း ကျွန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုအသာပြုံးကြည့်မိသည်။ ထို့ နောက် သူ့ပါးလေးကို အသာဆွဲညှစ်လိုက်၏။ သူရောကျွန်တော်ရောနှစ်ယောက်သား တိုးတိုးလေးရယ်လိုက်မိသည်။ အချိန်တွေဘယ်လောက်ပဲ ကြာခြဲ့ကာခဲ့သူဖန်ဆင်းလိုက်သည့် အပြုံးလေးကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် မရိုးနိုင်သော ကဗျာတစ်ပဒ်ုလိုပါပင်ဘယ်အချိန်ပဲဖတ်ဖတ် ရင်ထဲလှိုက်ဖြိုကည်နူးနေရသလို သူ့အပြုံးလေးသည် ကျွန်တော့်ကိုညို့ငင်နိုင်လွန်းသည်။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ြကားက ရင်ခုန်စရာ ပျော်ရွှင်ခြင်း အဖြစ်အပျက်တွေက ယခုအချိန်တွင် အသက်ဝင်နိုးထကာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ြကားအရိပ်ငွေှ့ တွေလို တိုးဝှေ့ နေသည်။
”ကိုသူ………………..ကိုသ…ူ ………….ကိုသူဘာဖြစ်တာလဲဟင် ကိုသူ…………….”
ရုတ်တရက်အော်သံနှင့်အတူ အခန်းတံခါးပွင့်လာကာ အခန်းထဲသို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာသဖြင့် ကျွန်တော့်တို့နှစ် ယောက်ြကား မီးပျက်သွားကာ အထိတ်တလန့်ဖြင့်ခေါ်သံလာရာသို့ သူရောကျွန်တော်ရော ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော် သိလိုက်ပါသည်။ထိုမိန်းကလေးက ဇင်မင်းသူ၏ရည်းစား ကောင်မလေးပင်။ သူမအပြေးအလွှားရောက်လာကာ ဇင်မင်းသူနားအတင်း လာထိုင်သဖြင့် ကျွန်တော်ဖယ်ပေးလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကို စားပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ကာ အသာ သူတို့နားမှ ခပ်ခွာ ခွာ နေလိုက်သည်။
ထိုအခိုက် အခန်းထဲသို့ နောက်ထပ်လူနှစ်ရောက်ဝင်လာပြန်သည်။
”ဟုတ်မောင်လေးရဲ့ အမဒီနေ့ဆိုင်မသွားတော့ဘူးလေ။ ဆိုင်ကို အမသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့တော့ ပစ်ထားလိုက်မလို့ ။ အဖေကလည်း သိပ်အရေးကြီးတာမရှိတာနဲ့တစ်ခါတည်းလိုက်လာခဲ့တာ။ ”
ကျွန်တော် သြော…် ……….ဟုသာပြောလိုက်ြပီး ဇင်မင်းသူတို့ ကုတင်ပေါ်သို့ အသာကြည့်လိုက်မိသည်။ဇင်မင်းသူအမက အကင်းပါးသည်။
”သူလေးက ဟန်နီကျော်ကျော်တဲ့။ သူသူ့ရဲ့ ကောင်မလေးလေ။ သူသူနေမကောင်းတာ ကြားလို့စိတ်ပူပြီးလိုက်လာတာ။”
ဇင်မင်းသူတို့ ကုတင်ြကည့်ရင်းဖြေလိုက်မိသည်။ ဇင်မင်းသူအဖေက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြကာသူ့သားနားတွင် စကားတွေပြောနေသည်။ ဇင်မင်းသူ၏ ကောင်မလေးကလည်း ဇင်မင်းသူကိုခေါက်ဆွဲခွံ့ ကျွေးနေသည်။ ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသည်။ ကျွန်တော့်အပြုံး၏ နောက်ကွယ်တွင်မျက်ရည်တွေရှိနေမည်။ ကြေကြွဲခင်းတွေရှိနေမည်။ အထီး ကျန်ခြင်း ဝေဒနာတွေရှိနေမည်။ သို့ပေမယ့်
ထိုအရာတွေ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ပေါ်သို့ ထင်ဟပ်မလာအောင် ကျွန်တော် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ကျွန်တော်ပြုံးနိုင်ရမည်။ ပြုံးရမည်။ သူနှင့်ပက်သက်လျှင် ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိစေရ။သူ့ဘ၀လေးသာယာနေလျှင် သူ့ပျော်ရွှင်နေလျှင် ကျွန်တော့်ရင်နှစ်ခြမ်း ကြွဲပီးသေသွားလျှင်တောင်ပြုံးနေနိုင်ရမည်။ ကျွန်တော်သည် သူ့အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးနိုင်သည့် နတ်သားတစ်ပါးမဟုတ်ပါလား။
”သား……………..အရမ်းပင်ပန်းနေမှာ ပေါ့။ ဆေးရုံမှာ ဆိုတော့ အိပ်ရတာ သိပ်အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူး။အိမ်ပြန်ပြီးအေးအေးဆေးဆေး နားလိုက်ဦးလေ။ ဦးတို့လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့သားတစ်လှည့်နားလိုက်ဦးပေါ”့ ဇင်မင်းသူအဖေဆီမှ စကားသံထွက်လာသည်။
”ဟုတ်ကဲ့ပါဦး။ ကျွန်တော် အခုပဲ ပြန်လိုက်ပါ့မယ”်
အင်းလေ။ ကျွန်တော်က အခုလူပိုတစ်ယောက်ြဖစ်နေသည်ပဲ။ ကျွန်တော့်ကို လိုမှမလိုအပ်တော့ပဲ။ကျွန်တော်ပြန်သင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်ရှိနေလျှင် သူတို့ထဲမှ တစ်စုံတစ်ယောက်က စိတ်ဆင်းရဲချင်ဆင်းရဲနေနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကြောင့် မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ စိတ်ဆင်းရဲတာ မဖြစ်စေချင်သလိုကျွန်တော့်ကြောင့် ဘယ်သူ့ ကိုမှ စိတ်ဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါ။ အမေထားခဲ့သည့် အ၀တ်အိတ်လေးကိုကိုင်ကာ ကျွန်တော် ထွက်သွားရန်ပြင်လိုက်သည်။
”အားလုံးပဲ ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်။ ဇင်မင်းသ…ူ ……… ဂရုစိုက်ပါ”
သူတို့ အားလံုး ကျွန်တော့်ကို အပြုံးဖြင့် တုန့်ပြန်ြကသည်။ သို့ပေမယ့် ဇင်မင်းသူတော့မပါပါ။ သူကျွန်တော့် ကို ငေးကြည့်နေရုံက လွဲ လို့မည်သည့် တုန့်ပြန်မှုမျှ မပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေလေးကန်နေမိပါသည်။ တံခါးပေါက်အနားသို့ရောက်သောအခါ ကျွန်တော်တံခါးရွက်ကို ကိုင်ကာဖွင့်လိုက်ြပီးအပြင်ထွက်မည်အလုပ် အခန်းထဲမှ အသံတစ်သံထွက်လာသည်။
ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ရပ်တန့်သွားမိသည်။ ကျွန်တော်ကျောခိုင်းထားရာမှအနောက်သို့ ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်၏။
”ဆရာလေး အားရင်ကျွန်တော့်ဆီကို ပြန်လာခဲ့နော”်
ကျွန်တော့်သူ့ကို ပြုံးပြပြီးပြန်ဖြေလိုက်သည်။ လာမှာ ပေါ့ ကွာ ။ မင်းအနားကို ကိုယ်ပြန်လာမှာ ပါ။ကိုယ်က မင်းအနားမှပဲ အရိပ်လို အမြဲရှိနေချင်ခဲ့တာပါ။ မင်း အနားမှာ ပဲကိုယ်တစ်သက်လုံးပေးဆပ်ချင်တယ်။
တကယ်ဆိုရင် မင်း က ကိုယ့်နှလုံးသားရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲ……..လေ။
အခန်းထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်နှင့်ဆရာဝန်ြကီးက ခရီးဦးကြိုပြုသည်။ ဇင်မင်းးသူ၏အဖေနှင့် အမေကဆရာဝန်ြကီးစားပွဲခုံရှေ့ ရှိ ခုံနှစ်လုံးတွင်ဝင်ထိုင်သည်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်၏အနောက်တွင် အသာမတ်တပ်ရပ်နေမိသည်။ ဆရာဝန်ြကီး က ထိုင်ရာမှထကာနံရံပေါ်တွင်ချိတ်ထားသော ဓာတ်မှန်စာရွက်တွေကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။ ထို့နောက်တစ်ရွက်ချင်းသေချာလှန်ြကည့်သည်။ ထို့နောက် ဦးခေါင်း မော့လာသည်။
”ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ လူနာမှာဖြစ်နေတဲ့ရောဂါက…………………..”
ဆရာဝန်ြကီးက စကားကိုပြောရင်းတန်းလန်းရပ်လိုက်ပြန်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မျက်နှာ တွေကိုအကဲခတ်ကာ ခေတတ္တမျှငြိမ် သက်သွားသည်။
”ပြောပါဆရာ ကျွန်တော့်သားလေးမှာ ဘာရောဂါဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်ပြောနိုင်ပါတယ”်
”ဓာတ်ခွဲခန်းက ရတဲ့အဖြေအရ လူနာမှာ leukemia လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကင်ဆာ စဖြစ်နေပါတယ”်
”ဗျာ……………………” ”ဗျာ………………” ”ရှင်………………”
ကျွန်တော့်ခန္ဓာ ကိုယ်ြကီး ယိုင်မသွားအောင် မနည်းထိန်းထားရသည်။ ကမ္ဘာ ကြီးတစ်ခုလံုး ငလျှင်တော်လဲသလို သွက်သွက်ခါ အောင်တုန်လှုပ်သွားသလား အောင့်မေ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းတွေမူးနောက်ကုန်သည့်။ ကျွန်တော့်နားထဲတွင် အသံတွေ ဆူညံနေသလို လှိုင်းဂယက်တွေ ထနေသည်။ကျွန်တော်ချွေးတွေ ပြန်လာကာ မောဟိုက်ချင်သလိုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်မယုံပါ။
သူ့မှာသွေးကင်ဆာဆိုတဲ့ ကြောက်စရာရောဂါဆိုးကြီး ရှိနေသည်တဲ့။ဟင့်အင်း ……ဟင့်အင်း…..ကျွန်တော်မယုံဘူး။ လုံးဝမယုံဘူး။
”ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား ဆရာရယ်။ သေချာလို့လားဗျာ။ကျွန…် ………..ကျွန်တော့်သားလေး………………………………….”
”အဖေ ………..သမီးတို့ဘယ်လိုလပုြ်ကမလဲဟင…် ………..သူသူလေးမှာ ……………..အဟင့်…………….အဟင့်…………..သူသူ လေးသနားပါတယ်အဖေရယ”်
ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေ မဆည်နိုင်တော့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းအိမ်က ပူစပ်လာသည်။ မျက်တောင်တွေခဏခဏပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ်ြဖစ်လာကာ မျက်ရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်စီးကျလာသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်စို့နင့်စွာ ကြေကွဲနေမိသည်။ ဇင်မင်းသူအမက ကျွန်တော့်ဖက်သို့လှည့်လာသည်။ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကို လက်မောင်းဖြင့်သုတ်ပစ်လိုက်သည်။
”သွေးစစ်ထားတဲ့အဖြေအရ လူနာမှာ WBC (White blood cells) သွေးဖြူဥတွေ သိပ်များနေတယ်။သွေးမှုံနည်းနေတယ်။ Hb သံဓါတ် နည်းနဲနေတယ်။ ရိုးတွင်း ခြင်ဆီကို Bone marrow aspirationလုပ်ြကည့်တော့ ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေ ကိုတွေ့ပါတယ်။ Chest x-ray ရင်ပတ် ဓါတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲ တက်စေ့တွေ ကြီးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးချက်တွေရဲ့ အဖြေအရလူနာမှာ သွေးကင်ဆာစ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သေချာနေပါတယ်ခင်ဗျား”
ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်လုံးတစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ြကည့်လိုက်မိသည်။ဇင်မင်းသူ၏အမတွင်လည်း ကျွန်တော့်နည်းတူ မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်တွင် ကျဆင်းနေပါသည်။ဦးလေးကတော့ စိတ်မကောင်းသည့်မျက်နှာ ဖြင့် ဆရာဝန်ြကီးကို မေးသည်။
ဒါ………ဆိုရင် ကျွန်တော့်သားလေးကို ကုလို့မရတော့ဘူးလားဟင်။ကျွန်တော့်သားလေးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ြပီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်နေ ရတာလဲဗျာ။ ကျွန်တော့်သားလေးကိုကယ်ပါဦးဆရာရယ်။ ပိုက်ဆံကုန်ချင်သလောက် ကုန်ပါစေ။ ကျွန်တော့်သားလေးကို
ကျွန်တော်အဆုံးရှုံမခံ နိုင်ဘူး ဆရာရယ်၊”
ဆရာဝန်ြကီးသည် ခေါင်းကို စိတ်မကောင်းဟန်ြဖင့် ဖြေးညှင်း စွာ ခါရမ်းလိုက်သည်။
”ကင်ဆာရောဂါကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေက အတိတ်ဝဋ်ကံ ကြောင့် ၀ဋ်ကံနာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဗျ။ သွေးကင်ဆာရောဂါက မျိုးရိုးလိုက်တာက ဖြစ်တာများပါတယ်။ သားသမီး တွေခမျာမိဘရဲ့အမွေဆိုးကို အသက်ပေးပြီးဆက်ခံဖို့ ကံပါလာတာလို့ပဲပြောရမှာ ပေါ့ဗျာ။ လူနာ့ရဲ့ မိဘတွေဆွေမျိုးတွေထဲမှာ သွေးကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့သူ ရှိမယ်ထင်တယ်။”
”ရှိပါတယ် ဆရာ။ သားလေးရဲ့ အမေကိုယ်တိုင်ပါပဲဗျာ။ သားလေးရဲ့အမေက သားလေးခုနှစ်နှစ်လောက်မှာ သွေးကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာရယ် သဒီူအမွေဆိုးကြီးကိုသားလေးကို ပေးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားဘူးဗျာ။ အခုကျမှ ဒီရောဂါဆိုးကြီးက ဘွားကနဲပေါ်လာတော့။ကျွန်တော့်သားလေးအတွက် ယူကျုံးမရဖြစ်နေရပါတယ် ဆရာရယ”်
”အင်း ရောဂါကပြောရတော့ခက်သားဗျ။ သူက ဘယ်အချိန်မှဖြစ်မယ် ဘယ်အခါမှရောဂါစမယ်ဆိုတာကို ပြောလို့ မရဘူးဗျ။ သူဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ထဖြစ်တတ်တာ။ cell တွေထဲက gene တွေdisorder ဖြစ်တာကနေစတာပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆဲလ်တွေ တည်ဆောက်မှုတွေချွတ်ယွင်းလာတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ ၏ ဆဲလ်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့
ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် Mutation ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေကို အစဉ်အမြဲ ထုတ်လွှတ်နေတတ်တယ်။ဆဲလ်တွေက အောက်ဆီဂျင်ကို ရေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရာမှာ စွမ်းအင်ထွက်လာသည်နဲ့အတူ ပုံစံပြောင်းလဲ သွားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးတွေဖြစ်တဲ့ Oxygen Radical တွေကိုပါထုတ်လွှတ်ပေးတယ်။ အဒဲီ့မော်လီကျူး တွေက ဆဲလ်ထဲက DNA အပါအ၀င်အခြားမော်လီကျူးတွေကိုပါ ၀ါးလုံး သိမ်းတိုက်ခိုက်တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆဲလ်တွေကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပျက်စီးမှုများကို ပြင်ဆင်နိုင် သည့် အရည်အချင်းရှိပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ကာကွယ်မှုမျိုးကို မပေးနိုင်ြကဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အသက်ြကီးပြင်း လာသည်နှင့်အမျှ Mutation တွေ၊ Mutant gene တွေ တိုးပွားလာ တော့တာပေါ့။”
”ဆရာဒါဆိုရင် လူနာက နောက်ထပ် ဘယ်လောက်ြကာကြာ အသက်ရှုင်နေနိုင်သေးလဲ ဟင”် ကျွန်တော်ထမေးလိုက်သည်။ ဆရာဝန်ြကီးရော ကျန်နှစ်ယောက်ပါ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လာကြသည်။
”ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူဘူးသားရဲ့။ များသောအားဖြင့်တော့သွေးကင်ဆာရောဂါက ခြောက်လပဲခံတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနာကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်။လူနာကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ဓာတ်တက်ြကွနေမယ်ဆိုရင် ခြောက်လမကပါဘူး။ လူနာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုရင် လူနာ့ရဲ့အသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားလို့ရပါတယ်။ အဓိကက လူနာကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ြဖစ်အောင် ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ”်
ကျွန်တော့်နှလုံးသားအစုံသည် ပြင်းထန်သည့်ထိုးနှက်ချက်ကြောင့် တဆစ်ဆစ်နာကျင်သွားရသည်။လေထဲတွင် ပေါ့ပါးစွာ လွင့်မြော နေပြီး ရုတ်တရက် ချောက်နက်မြဲကီးထဲကို ဆွဲချခံလိုက်ရသလိုကျွန်တော့်တွင် စိုးရွံ့ မှု ထိတ်လန့် မှုတွေ ဖိတ်ယိုစီးဆင်းလာသည်။ ကျွန်တော်ခြောက်ကပ်စွာ အခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ငိုချင်စိတ်ကသာကြီးစိုးနေသည်။ ကျွန်တော်ငိုချင် သည်သို့ပေမယ့် မျက်ရည်မကျချင်ပါ။ မျက်ရည်မကျပဲ ငိုလို့ရလျှင်ကောင်းမည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်မည်သူမှမသိပဲ ကျွန်တော် အကြိမ်ြကိမ်အခါခါငိုနေမိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်ရတဲ့သူကျွန်တော်သိပ်မြတ်နိုးရတဲ့သူ ကျွန်တော်တန်ဖိုးအထားဆုးံ သူကျွန်တော့်အတွက်အရေးပါဆုံးသောသူသည် ကျွန်တော့်ကိုထားကာ ဟိုးအမည်မသိတဲ့ဝေးကြီးကိုထွက်သွားတော့မည်ကို ကျွန်တြော်ကိုသိလိုက်ရချိန်တွင်ကျွန်တော်မှာ တောင့်တင်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့။ ကျွန်တော်သိပ်ဝမ်းနည်းမိသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုံးလေး။ ကျွန်တော်ရူးရူးမူးမူးစွဲလမ်းခဲ့ဖူးသည့် သူ့ရဲ့အပြုံလေး။
ကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်တွေ့ ရတော့မှာ မဟုတ်တော့။ သူ့ရဲ့ရယ်သံလေးတွေ သူစကားပြောသံလေးတွေသူ့ပုံရိပ်လေးတွေ ဤကမ္ဘာ မြေကြီးကနေ အပြီးအပိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မည်။ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်သို့လိမ့်ဆင်းလာသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် တင်းကျပ်နေသည်။ကျွန်တော် စိတ်ရှိလက်ရှိအော်ပစ်လိုက်ချင်သည်။ တစ်ခုခုကိုပေါ့။ ကျွန်တော်စိတ်ကို တခဏလေးဖြစ်ဖြစ်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားစေလျှင်ပင် ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါသည်။လောကကြီးရဲ့ အချိန်တွေကို ရပ်တန့်လို့ရလျှင်ကောင်းမည်။ ကျွန်တော် ရှေ့ဆက်ပြီးရောက်ရှိလာမည့်အချိန်တွေကို မလိုချင်တော့ပါ။ သည်အချိန် သည်အခါကိုပဲတစ်သက်လုံးရပ်ထားပစ်လိုက်ချင်သည်။ အနာဂတ်က အချိန်တွေက ကျွန်တော့်အတွက် ကံဆိုးမှုတွေရင်နင့်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တွေကို ပွေ့ပိုက်ပြီးစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်း ထဲမှာကပ်ညိခဲ့တဲ့ သူ့ အပြုံးလေးကို ကျွန်တော်လက်လွှတ်ဆုံးရှုံရတော့မည်။ ကျွန်တော် ငိုပါရစေ………………….. ကျွန်တော်ငိုပါရစေဗျာ…………………………………
ကျွန်တော့်လက်တွေ တုန်ယင်စွာ ဖြင့် တံခါးလက်ကိုင်ဘုကို ဖြည်းဖြည်းခြင်းလှည့်လိုက်သည်။လက်တစ်ဝက်ခန့်လည်သွားသောအခါ အခန်းတံခါးက ဂျောက်ကနဲဖြစ်ကာ ပွင့်သွားသည်။ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေ တိုးညှင်းစွာ ရိုက်ခတ်နေသည်။ ကျွန်တော်တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည်။အထဲတွင် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ကုတင်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းနေသော ဇင်မင်းသူ၏ အသက်ရှုသံကိုပင် အတိုင်းသားကြားနေရသည်။ ကျွန်တော်အခန်းထဲသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ဇင်မင်းသူအနားသို့ ရောက်သောအခါ အသာအနားတွင် ၀င်ထိုင်လိုက၏် ။ အပြစ်ကင်းစင်စွာအိပ်ပျော်နေသော သူ့ ကြိုကည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲ စို့တက်လာသည်။ ကျွန်တော်သူ့ဆံစလေးတွေကိုကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်မိသည်။
ထိန်းထားသညြ့်ကားထဲက ကျွန်တော့် မျက်ရည်တွေ လျှံလာသည်။ ကျွန်တော်ရှိုက်သံတွေ အခန်းထဲသို့တိုးတိုးလေးပြန့် နှံ့သွားသည်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ တုန်ယင်လာသည်။ ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေမျက်ဝန်းအိမ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာ ပေါ်မှဖြတ်သန်းစီး ဆင်းပြီး မေးစိအောက်မှတစ်ဆင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
ငုံ့ထားသော ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ပြန်မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်လက်လေးပေါ်သို့နူးညံ့သည့်လက်ကလေး တစ်စုံနွေးထွေစွာ လာရောက်ဆုပ်ကိုင်လာသည်။ သူမအိပ်သေးပါလား။သူအိပ်လောက်ြပီ ထင်ြပီးကျွန်တော် သူ့အခန်းထဲသို့ တိတ်တိတ်လေးဝင် လာခြဲ့ခင်းဖြစ်သည်။ ယခုညဆယ်နာရီထိုးနေချေပြီလေ။
”အိပ်ပျော်နေပြီ။ လန့် နိုးသွားတာ။ အိမ်မက်နေတာဗျသိလား အကို။ ”
”ဟုတ်လား ဘာအိမ်မက်တွေမက်နေတာလဲ။ အကိုလာလိုက်လို့ အိပ်ရေးပျက်သွားပြီထင်တယ်။”
”အကို အိမ်မက်ထဲမှာ လေ ………ကျွန်တော်က အကို့ကိုထားခဲ့ပြီး ဘယ်ဆီမှန်းမသိတဲ့နေရာကြီးကိုထွက်သွားမလို့တဲ့။ အကိုကကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး နှုတ်ဆက်နေတယ်အကို။ ကျွန်တော်က အကို့ကိုပြုံးပြုပြီးထွက်သွားတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူးအကိုရယ်။ ကျွန်တော်လေအကို့ကိုထားပြီး ဘယ်ကိုမှမသွားချင်ဘူး။ အကိုလည်းကျွန်တော့်ကို ထားပြီးဘယ်ကို မှမသွားပါနဲ့ဗျာ နော…် ………………”
”ညီလေးရယ…် ……အကိုက ညီလေးကို ထားပြီးဘယ်ကိုသွားရဦးမှာ တုန်းညီရဲ့။ စိတ်ချပါအကိုမင်းအနားမှာ အမြဲရှိနေမှာ ပါ”
”အကို ကျွန်တော်ဘယ်တော့ အိမ်ပြန်လို့ရမှာ လဲဟင်။ ကျွန်တော်စာတွေကျက်ရဦးမယ်လေဗျာ။ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ ဆေးရုံကဆင်းခွငြ့်ပုမှာ တဲ့လ”ဲ
”ညီလေးနေကောင်းတဲ့အခါကျရင် ပြန်ရမှာ ပေါညီ့လေးရဲ့။ ညီလေးသာ နေကောင်းအောင်နေနော်။အကို့ကိုချစ်ရင်ကတိတစ်ခုပေး။ ညီလေး နေကောင်းနေပါ့မယ်လို့။ ထပ်မဖျားတော့ပါဘူးလို့”
”အကိုကလည်း ကျွန်တော့်မှာ ဘာရောဂါရှိလို့ ဖျားနေရမှာ လဲ။ အကိုပြောနေတဲ့ပုံက ကျွန်တော့်ဆီမှာရောဂါတစ်ခုခုရှိနေတဲ့အတိုင်း ပဲ။ ကျွန်တော်မသေနိုင်သေးဘူး။ ဟုတ်တယ်မိုလား။ကျွန်တော်သေတော့မသေလောက်သေးပါဘူး ”
ကျွန်တော်သူ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို လက်ညိုးလေးဖြင့်လှမ်းပိတ်လိုက်သည်။သူရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်သူ့ကို ရင်ခွင်ထဲသို့ထွေးပွေ့ပြီးဖက်ထားလိုက်သည်။ သူ့ ခေါင်လေးကို ယုယစွာ ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်။”
ဒါပေ့ါညီလေးရယ် ညီလေးအသက်ရှင်နေရမှာ ပေါ့။ ညီလေးမသေပါဘူး။…………………..”
ကျွန်တော့် မျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးကျလာပြန်သည်။ ကျွန်တော်မျက်ရည်စတွေလိမ့်ဆင်းသွားသောအခါ သူ့လက်ဖမိုးပေါ်သို့ စက်ကနဲ့ကျသွားသည်။ သူရုတ်တရက်သူ့လက်ဖမိုးလေးကို ကြည့်လိုက်၏။ ထို့နောက်ကျွန်တော့်မျက်နှာ ဆီသို့ အကြည့် ရောက်လာသည်။
”ဘာဖြစ်လို့် ငိုနေတာလဲ အကိုရယ…် ………………မငိုပါနဲ့……………….မငိုပါနဲ့ နော…် ………….ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရင်မငိုနဲနော်။
တိတ…် …..တိတ…် …….တိတ…် ……………”
သူကျွန်တော့်ကို ကလေးတစ်ယောက်လို ချော့မြူနေသည်။ ကျွန်တော့်ပါးပြင်က မျက်ရည်တွေကိုသူ့လက်နုနုလေးဖြင့် ယုယစွာ သုတ်ပေးသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ပိုလို့ မျက်ရည်ကျလာသည်။ ကျွန်တော်သူ့ရင်ခွင်ထဲတွင် အားရပါးရငိုမိသွားသည်။
အချိန်တွေသည် ……………….တရွေ့ ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ နေ့နှင့်ညတို့သည်လက်ချင်းဆက်လျှက် လောကကြီးကို တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ ပိုပြီးအိုမင်းရင့်ရော်သွားအောင်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ စိုစွတ်သော မိုးစက်တို့တွေအစား နှင်းပွင့်လေးတွေ ၀င် ရောက်လာသည်။အေးမြသော ဆောင်းရနံ့ကလောကကြီးကို ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်အေးခဲနေစေခဲ့သည်။လူတွေသည်လည်း နှင်းပွင့်များကြားထဲတွင်သာ နေထိုင်သွားလာလျှက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီး သည်အတိတ်တွေကို ဝေးမှာ ထားခဲ့ပြီး အနာဂတ်သစ် နေ့ရက်တွေဆီကို လက်ပစ်ကူးလျှက် ခရီးဆက်နေသည်။
တလွင့်လွင့်လူးနေသော အေးစက်စက်လေများသည် အာကာယံထက်မှ မြူတွေရစ်သိုင်းနေသောတိမ်ငွေ့ တွေကို ဟိုသည်ရွေ့လျား အောင် ထွေးမှုတ်လျှက်ရှိသလို သစ်ကိုင်းတစ်ခုထဲတွင်နားနေသည့်ငှက်အုပ်စြုကီးသည်လည်း ဝေါကနဲ ဝေါကနဲ ထပြီး ပျံသန်း ကုန်ြကသည်။အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်သွားသော မော်တော်ကားများကြောင့် လွင့်သွားသော သစ်ရွက်စလေးတွေ သည်လည်း ပေတရာလမ်းမကြီးနဘေးတွင် ပြန့်ကြဲကုန်သည်။ မြို့လယ်ခေါင်မှနာရီစဥြ်ကီးသည်လည်းနှင်းများကြားတွင် ငြိမ်သက်လျှက်
သာယာလှပသည့် တေးသွားတစ်ပဒ်ုသည်လည်း မနှစ်မျို့ခြင်းသံစဉ်တွေကို ပွေ့ပိုက်ကာအဆုံးမဲ့အနတ္တကမ္ဘာ ကြီးဆီသို့ လွင့်မြောသွားသည်။ လောကကြီးသည် အထီးကျန်လျှက် ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးကုန်သည်။ ဘ၀၏နေ့ရက်တွေသည် မျက်ရည်တြွေကားထဲတွင်သာ နစ်မွန်းနေခဲ့သည်။အိမ်မက်ရထားကြီးသည်လည်း တိမ်ဖြူတွေကို ဖြတ်သန်းကာ တဂျုံးဂျုံးအဝေးသို့
ခုတ်မောင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သက်ပြင်းတွေသည်လည်း မောဟနှင့်ပေါင်းစပ်ကာရင်ခွင်မှအငွေ့ပြန်ြပီး အထက်ကောင်းကင်သို့ ပြန်တက်သွားသည်။သည်နေရာလေးကို သူနှင့်ကျွန်တော် ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်သည်။ သူနှင့်ကျွန်တော် sunset ကြည့်ခဲ့သည့် နေရာလေး……………။ လွင့်ပါးနေသော တိမ်စတြွေကားထဲတွင် မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်နေသော မြို့ကလေးသည်ဆိတ်ငြိမ်လျှက်ရှိသည်။ တိမ်နီတြွေကားထဲတွင် နစ်မြုပ်လုနီး နေသော နေ၀င်းကြီးကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိသည်။ အေးစိမ့်စိမ့် ညနေဆောင်းလေပြေက ကျွန်တော်နှင့်သူ့ကြားထဲသို့ပွတ်၍တိုက်ခတ်သွားလေသည်။
”ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ အဆောင်ြပန်တက်ရမှာ လဲ။ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ စာပြန်ကျက်ရမှာ လဲ။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ အိမ်ြပန်လို့ ရမှာ လဲ။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါဦး။”
”တစ်နေ့နေ့ပေါ့ ညီလေးရယ…် …………”
သူအရှေ့ ကိုငေးနေရာမှ ကျွန်တော့်ဖက်သို့လှည့်လာသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်ကိုနားမလည်သလြိုကည့်သည်။ ”အဒဲီ့တစ်နေ့နေ့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှရောက်လာမှာ လဲ။ ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ကျွန်တော့်ကို အမှန်တိုင်းပြောပါလား။ ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေ ကျွန်တော့်အပေါင်းအသင်းတွေကျွန်တော်နဲ့ ပက်သက်ရာပက်သက်ကြောင်းတွေ နောက်ဆုးံ ဆရာလေးအပါအ၀င် ကျွန်တော့်ကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကို ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကို သေခါနီးလူမမာတစ်ယောက်လို နောက်ဆုံးချိန် ရောက်နေသလို ၀ိုင်းပြီးကရဏုာသက်နေကြတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်တော်ဟာသူများတွေဝိုင်းပြီး သနားရမယ့် သနားစရာသတ္တ၀ါတစ်ကောင်ြဖစ်နေပြီလား။ ”
ကျွန်တော်သူ့ကို အနောက်မှနေပြီး တင်းတင်းဖက်ထားလိုက်ပါသည်။ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်လေးသည်အရင်လို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်မရှိတော့ချေ။ အနောက်မှနေ၍ သူ့လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အဝေးသို့ ငေးနေမိသည်။
”ကျွန်တော့်သိပါတယ…် …………..။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ကျွန်တော့်ကို တစ်နေ့တစ်နေ့တိုက်နေတဲ့ anticancer ဆေးတွေ chemotherapeutic ဆေးတွေကိုသောက်နေရတာ ကျွန်တော်အရမ်းပင်ပန်းတာပဲ အကိုရယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဘာဖြစ်လို့ကင်ဆာရောဂါကြီးရှိနေရတာလဲဟင”်
”မင်းဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာလဲဟင်။ မင်းကိုဘယ်သူပြောပြလိုက်တာလဲ။ ”
”ကျွန်တော်က ကာယကံရှင်လေဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အသိဆုံးပေါ့ ဒါပေမယ့် ကင်ဆာ ရောဂါဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အမှတ်မထင်ပဲသိလိုက်ရတာ။ဆရာလေး ကျွန်တော်နဲ့ ဆေးရုံမှာ အတူတူ အိပ်တဲ့ညက
ဆရာလေးအိမ်မက်ယောင်ပြီးပြောလာတယ်။ ”မဖြစ်ရဘူး ဇင်မင်းသူဆီမှာ ကင်ဆာမဖြစ်ရဘူးတဲ့”။ဆရာလေးတို့ အားလုံးကျွန်တော့်ကို ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်ဗျာ။”
ကျွန်တော်ရှိုက်သံထွက်အောင်ငိုမိသွားသည်။ သူ့ကိုလည်း တင်းကြပ်နေအောင် ဖက်ထားမိသည်။”လူဆိုတာ အချိန်တန်ရင်သေရမှာ ပါပဲ အကိုရယ်။ ကျွန်တော်သေရမှာ ကို ၀မ်းမနည်းပါဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အကို့ကို တစ်ယောက်ထဲ မထားခဲ့ချင်ဘူး။ကျွန်တော်အကို့ကိုသနားတယ်။ ကျွန်တော်မရှိတော့ရင်လဲ အကိုပျော်ပျော်နေနော်။ ကျွန်တော့်ကို ကတိပေး အကိုတစ်သက်လုးံ ကောင်းကောင်းနေသွားပါမယ်လို့”
ကျွန်တော့်တွင်သူ့ ကိုပြောစရာစကားမရှိတော့။ ကျွန်တော့်၏ခံစားချက်များသည် အပြင်ဖက်သို့ ထိုးဖောက်ထွက်ရောက် နိုင်စွမ်းမရှိတော့ချေ။ ကျွန်တော်သူ့ကို သနားသည်။ ကျွန်တော်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးနိုင်အောင်ြကိုးစားမည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ဟာ သူ့အတွက်အသုံးဝင်သည့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ Sunset ကြညြ့်ပီးညနေမိုးချုပ်သွားသည်နှင့် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ြပန်လာခဲ့သည်။ ဆေးရုံကိုပြန်ရောက်တော့ ညခုနှစ်နာရီထိုးနေချေပြီဖြစ်သည်။ အခန်းထဲတွင် အသင့်ရောက်နေသော
ဇင်မင်းသူအမက စားစရာတွေ အဆင်သင့်ပြင်ထားပေးသည်။ သူနှင့်ကျွန်တော်ထမင်းအတူတူစားကြသည်။ ဟင်းတွေက ဖွယ်ဖွယ် ရာရာရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့၏ ထမင်းဝိုင်းကတိတ်ဆိတ်ြခင်းများဖြင့်သာ ပြီးဆုံးသွားသည်။ အရသာဆိုသည်မှာ ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိ။
ရင်ထဲမှဝေဒနာကို အစားအသောက်ကောင်းတွေကလည်း ချေဖျက်မပေးနိုင်ပါ။
ထမင်းခွက်တွေ သိမ်းနေရင်း ခေါ်သံထွက်လာသဖြင့် ကျွန်တော်မြော့ကည့်လိုက်သည်။အခန်းတံခါးပေါက်ဝရှေ့ တွင် ရပ်နေသည့်အသံပိုင်ရှင်မိန်းကလေးက ကျွန်တော်ကြိုမင်တော့အသိမှတ်ြပုသည့်အနေဖြင့် ပြုံးပြသည်။ ထို့နောက်အခန်းထဲသို့ ၀င်လာကာကုတင်ပေါ်တွင်လှဲေ နသော ဇင်မင်းသူနားသို့ သွားထိုင်သည်။
”ဟန်နီသင်တန်းတွေများနေလို့ ကိုသူ့ဆီကိုမလာနိုင်တာ ဟန်နီ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ ဟန်နီလေကိုသူစားဖို့ စားစရာတွေယူလာတယ် သိလား။ ကိုသူအားရှိသွားအောင် စားလိုက်နော”်
”ကြက်သားဆန်ပြုတ်လေကိုသူ ပြီးတော့ ကိုသြူကိုက်တဲ့ ပန်းသီးကိုလည်း အခွံနွှာ ပြီး ချိုင့်ထဲမှာထည့်လာခဲ့တယ်။ ”
”ကိုသူဘာမှ စားချင်စိတ်မရှိဘူး။ အခုပဲထမင်းစားထားတာ။ ဟန်နီဥစ္စာ တွေကို ပြန်ယူသွားပါတော့နော်။ပြီးတော့ ဟန်နီလဲဒီကို သိပ်မလာပါနဲ့တော့။ ကိုသူဆိုလိုတာက ကိုသူအမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်နေတာဟန်နီမဟုတ်ဘူး ဟန်နီ။ ကိုသူက မကြာခင်ဟိုးအဝေးကြီး ကို ထွက်သွားရတော့မယ့်သူတစ်ယောက်ပါဟန်နီရယ်။ ကိုသူ့ ကြောင့် ဟန်နီပဲစိတ်ပင်ပန်းရမှာ။ ပြန်ပါတော့ ဟန်နီရယ်နော”်
ဇင်မင်းသူဆီမှ စကားသံလေးတွေ ခပ်ဖွဖွထွက်လာသောအခါ ဟန်နီသည်မျက်နှာ မကောင်းဖြစ်သွားသည်။ ထို့ နောက် ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်ြကည့်သည်။ကျွန်တော်သြူကည့်တာကို ခံလိုက်ရတော့ လိပ်ပြာမလုံသလြိုဖစ်သွားသည်။ သူမက ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ဇင်မင်းသူဖက်သို့ ပြန်လှည့်သွားသည်။
”ကိုသူမစားချင်ရင်လဲ ဟန်နြီပန်ယူသွားပါ့မယ်။ ဂရုစိုက်ပါကိုသူ ဟန်နီနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ”်
ထို့နောက်သူမက ဇင်မင်းသူ၏အမကို နှုတ်ဆက်ကာ ပြန်သွားသည်။
ညသည်မဲမှော င်လျှက်တိတ်ဆိတ်နေလေသည်။ အခန်းထဲတွင် ညအိပ်မီးအပြာရောင်လေးက လွဲ၍အခြားအလင်းရောင်မရှိပါ။ ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်တွင် ဇင်မင်းသူမှေးစက်နေသည်။သို့ပေမယ့်သူမအိပ်သေးသည်ကို တော့ကျွန်တော်သိသည်။
”အိပ်တော့လေ ညီလေးရဲ့ ”
”ဘာဖြစ်လို့လဲ ညီရ။ ညနက်နေပြီဥစ္စာ အိပ်မှပေါ”့
”ကျွန်တော်အိပ်လိုက်ရင် ပြန်မနိုးတော့မှာ ကြောက်တယ်အကို။ ကျွန်တော်ပြန်မနိုးတော့ပဲတစ်သက်လုံးအိပ်ပျော်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာ လဲ။ ကျွန်တော်မအိပ်ရဲတော့ဘူးဗျာ။ ”
”ညီလေးရယ် ဟိုဟဒို ဒီတွေ သိပ်မစဉ်းစားပါနဲ့။ ညီလေးအကိုနဲကအတူနောက်ထပ်အကြာကြီးနေရဦး မှာ ပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့ညီလေးရယ နော်။ အိပ်တော့နော”်
”ကျွန်တော်လေ အပြင်ကိုထွက်ချင်တယ်။ အပြင်မှာ နှင်းတွေကျနေမှာ ပဲနော်။ ”
”အခုဆယ်နာရီထိုးနေပြီလေ ညီလေးရဲ့။ ဘယ်ကိုသွားချင်လို့လဲ။ အပြင်မှာ အရမ်းအေးတယ်မသွားပါနဲ့တော့နော”်
”သိဘူးအကိုရာ ကျွန်တော်အပြင်ကို ထွက်ချင်တယ်။ ဒီအချိန်လောက်ဆို ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲစနေလောက်ပြီ။ ကျွန်တော်သွား ချင်တယ်အကိုရယ် လိုက်ပို့ပေးပါနော”်
ကျွန်တော်တားမြစ်ချင်ပေမယ့် မတားမြစ်ရက်ပါ။ သြူဖစ်ချင်တာတွေ သူလုပ်ချင်တာတွေကို ကျွန်တော်တတ်နိုင်မျှဖြည့်ဆည်းပေးချင် သည်ပဲလေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါင်းညိတ်ြပလိုက်ပါသည်။
”ဒါဆိုရင် ညီလေးကို အကို အ၀တ်စားလဲပေးမယ့်။ ကိုယ့်လက်သန့်ရှင်းရေး အရင်လုပ်ရအောင်နော်။ပြီးရင် အနွေးထည်ထူထူဝတ်ပြီး ဘိုးဖိနပ်စီးပြီးသွားကြတာပေါ”့
ကျွန်တော် ဆေးရုံအခန်းအပြင်ဖက်သို့ ထွက်သွားလိုက်ပြီး ရေဇလြုံဖင့်ရေနွေးအနည်းငယ်ထည့်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရေအေး အနည်းငယ်ဖြင့်ရောစပ်ကာရေကိုအသင့်အတင့်နွေးအောင် ရောစပ်လိုက်သည်။ ဇင်မင်း သူအနားသိုလျှောက်လာခဲ့ပြီး အနားသို့ရောက် သောအခါ သူ့ခါးမှ ဆေးရုံဝတ်င်္အကျြီကီး ကို ချွတ်ကာ တံဘတ်အသေးတစ်ထည်ဖြင့်ရေနွေးစွတ်ပြီး ရေဘတ်တိုက်ပေးလိုက်သည် ။သူ့လက်ကလေးတွေကို ယုယကြင်နာစွာ ပွတ်ပေးနေရင်းသူ့ကြိုကည့်မိသည်။ ယခင်က စဲမွ က်ဖွယ်ရာ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်လေးသည် ယခုအခါမှာ တော့ပိန်လှီပိန်ခြောက်ကလေးဖြစ်နေသည်။ ကျောကုန်းအနောက်ဘက်မှ ကြည့်လျှင် နံရိုးလေးတွေငေါထွက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်သူ့လက်တွေမှတစ်ဆင့် လည်ပင်းတစ်ဝှိက်ကိုသန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့ နောက်မျက်နှာ ကို ပါရေဘတ်ြဖင့် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။
”ညီလေး ခြေထောက်ကော ဆေးရအောင်နော်။ အကိုညီ့ကို ခြေထောက်ဆေးပေးမယ”်
”ကျွန်တော်ငရြဲကီးနေပါဦးမယ်ဗျာ။ ခြေထောက်တော့ မဆေးပေးပါနဲ့တော”့
”ငရဲမကြီးပါဘူး ညီလေးရယ်။ အကိုက ညီ့ရဲ့ချစ်သူပဲ ညီ့ကဒီုလောက်တော့လုပ်ပေးရမှာ ပေါ့။ကဲ …………………..ခြေထောက်မြှော က”်
ကျွန်တော်သူ့ ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ြပီး သူ့ခြေထောက်မှ ဘောင်းဘီစကိုအပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက၏် ။ ထို့ နောက်ရေဇလုံကို ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ချကာ သူ့ခြေထောက်လေးတွေကိုတစ်ချောင်းချင်းမပြီး ရေဇလုံထဲသို့ ရွှေ့လိုက်သည်။ ခြေသလုံးမွှေးလေးတွေဖြင့် နုနေသော သူ့ ခြေထောက်လေးတွေကို အသာလက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပြီး ရေနွေးဖြင့် ဆေးလိုက၏် ။ထိုအခိုက်သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်သို့ ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ဆံပင်လေးတွေကိုလာထိတို့ ကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက၏် ။ သူနှင့်အကြည့်ချင်းဆုံသွားသောအခါကျွန်တော်သူ့ဆီမှ အပြုံးခပ်နွမ်းနွမ်းလေးတစ်ခုရလိုက်သည်။
ပွဲခင်းသွားရာလမ်းတစ်လျှောက် ဆိုငက် ယ်များဖြင့်သာ ပြည့်ကျပ်နေသည်။ ပွဲခင်းသို့သွားရန် လမ်းမှာပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး တစ်ခုသာရှိသဖြင့် စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် ယဉ်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်။လမ်းတစ်လျှေက်တွင် ရှမ်းအလံတပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်များက တ၀ီဝြီဖင့်အနားတွင်ရှုပ်ရှုတ်ခတ်နေ၏။ ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကို သတိကြီးစွာ မောင်းနှင်လာခဲ့သည်။အနောက်မှခွထိုင်လိုက်ပါလာသော ဇင်မင်းသူက ကျွန်တော့်ခါးကိုဖက်ကာ ပုံခုံးပေါ်တွင်ခေါင်းမှီပြီးငြိမ်သက်ရင်းလိုက်ပါလာသည်။ပွဲခင်းထဲသို့ရောက်သောအခါ ဆိုင်ကယ်ကို ပါကင်တစ်ခုတွင်သွားအပ်လိုက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာခြဲ့ကသည်။ ပွဲခင်းထဲတွင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်များ အကင်ဆိုင်များ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်များဖြင့် စည်ကားလျှက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်ဇင်မင်းသူနှင့်ယှဉ်လျှောက်နေကာ သူ့ကိုပုခုံးမှဖက်ထားသည်။ သူ့မျက်နှာ လေးဝင်းပနေသည်။ ကြည့်ရသည်မှာသူတော်တော်ပျော်နေပုံပေါ်ပါသည်။ကြပ်သိပ်နေသာ လူအုပ်ြကီးကို တိုးကာ သူနှင့် ကျွန်တော် ပွဲခင်းထဲသို့ပတ်လည်ြကသည်။ ပွဲခင်းထဲမှအချို့စားသောက်ဆိုင်များသည် လူကိုပင် ထဆွဲေ တာ့မည့်အလား အလုအယက် အော်ဟစ်ဖိတ်ခေါ်နေကြည်သည်။ အသံဗလံပေါင်းစုံကလည်းဆူညံနေသည်။
ပွဲ၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင် ရှမ်းဇာတ်တစ်ခုရှိကာ ညာဖက်ထိပ်တွင်တော့ စတိတ်ရှိုးတစ်ခုရှိသည်။အားလုံက ရှမ်းပြွဲဖစ်သဖြင့် ပွဲခင်းထဲတွင် ရှမ်းစကားသံများဖြင့်သာ လွှမ်းခြုံနေလေသည်။သူနှင့်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်း လျှောက်လာရင်း စတိတ်ရှိုးစဉ်နားသို့ရောက်လာကြသည်။
စတိတ်စဉ်နားသို့ရောက်သောအခါ ရှမ်းအဆိုတော်များ သီဆြိုခင်းမရှိတော့ပဲအရပ်သားများတက်ဆိုနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ စတိတ်စဉ်အနားရှိ ပန်းကုံးရောင်းသည့်နေရာတွင်လူများပြည့်ကျပ်နေသဖြင့် သူရောကျွန်တော်ရောစိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ထို့နောက်
ထိုနေရာသို့ လျှောက်လာခြဲ့ကသည်။အနားသို့ရောက်သောအခါမှ သဘောပေါက်သည်။ စတိတ်စဉ်ပေါ်တွင် သီချင်းတက်ဆိုရန်
”ညီကလည်း အောက်မှာ ဒီလောက် လူတွေအများကြီးကို အကိုကဘယ်လိုလုပ်တက်ဆိုရဲမှာ လ”ဲ
”အကိုကလည်း လူများတော့ကောဘာဖြစ်လဲ။ ဟိုမှာ တောက်တဲ့လှည်းနင်းတဲ့အသံတွေနဲ့ အသံသေးအသံကြောင်တက်ဆိုနေကြတာ မမြင်ဘူးလား။ အကိုက သူတို့လောက်မဆိးု သေးပါဘူး။တက်ဆိုပါဗျာ နော်………..ကျွန်တြော်ကည့်ချင်လို့ပါ။”
”ရှးု ………………တိုးတိုးပြောပါ။ သူများတြွေကားကုန်ပါဦးမယ”်
သူ့မျက်နှာ ချက်ချင်း အရောင်ပြောင်းသွားသည်မို့ ကျွန်တြော်ပာပြာသလဲ ပြန်ဖြေလိုက်ရသည်။”ဆို………….ဆိုပါ့မယ်ညီလေးရယ်။ ခဏလေးစောင့်နော် အကိုနာမည်ပေးလိုက်ဦးမယ”်
သူ့ကိုခဏထားခြဲ့ပီး ကျွန်တော်ပန်းကုံးရောင်းသည့် ဆိုင်ခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။အထဲသို့ ရောက်သောအခါ နာမည်စာရင်းရေးနေ သည့် လြူကီးနားသို့သွားကပ်လိုက်ကာ
”ဦးလေး သီချင်းဆိုချင်လို့ ပါ”
”နာမည်ပြောကောင်လေး။ အလှူငွေ ငါးထောင်ထည့်ရမယ်နော်။ အလှည့်ကျရင်ဆိုရမယ် ”
ကျွန်တော်ပိုက်ဆံငါးထောင်ဖြင့် နာမည်စာရင်းပေးလိုက်ကာ ဆိုမည့်သီချင်းအမည်ကိုပါတစ်ခါတည်းပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် လူအုပ်ြကားထဲမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဇင်မင်းသူအနားသို့ပြန်ရောက်သောအခါ သူကျွန်တော့်ကို ရယ်ပြသည်။
”က…ဲ ……..လာ စတိတ်စဉ်နားကိုသွားရအောင် ခဏနေနာမည်ခေါ်လိမ့်မယ်။ သွားစို့”
စတိတ်စဉ်အောက်သို့ ရောက်သောအခါ သီချင်းသံတွေက ပိုမိုကျယ်လောင်စွာ ဆူညံလာသည်။ဆောင်းဘောက်စ်မှ မြည်ဟီး လာသော ဂီတသံများသည် ရင်ဘတ်ထဲရှိ နှလုံးသားကိုတဒိန်းဒိန်းဖြင့်ရိုက်ခတ်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်တော် ဇင်မင်းသူလက်ကိုတြွဲပီး စတိတ်စဉ်အရှေ့ဆုံးသိုဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်။
”ယခုသီဆိုဖို့အလှည့်ကျသကတော့ ချစ်ရဲအောင်ြဖစ်ပါတယ်။ သီဆိုမယ့်သီချင်းလေးကတော့အပြုံးလေးပါတဲ့ ခင်ဗျား”
ကျွန်တော်ဇင်မင်းသူကို တစ်ချက်ြကည့်လိုက်ြပီး သက်ြပင်းတစ်ချက်မှုတ်ကာစတိတ်စဉ်ရှိရာသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ စတိတ်စဉ်ပေါ်သို့ လှေကားထစ်လေးမှတစ်ဆင့် တက်လာခြဲ့ပီးတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြင့် မိုက်ခွက်ရှိရာသို့လှမ်းလိုက်သည်။ အောက်မှ ကြည့်ရှုနေကြသည့်
ပရိတ်သတ်တွေကို မြင်သောအခါ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ကတုန်ကယင်ြဖစ်ချင်လာသည်။
ကျွန်တော်အောက်သို့ ငုံ့ ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျွန်တော့်ကို အရှေ့ဆုံးမှလက်ရမ်းပြနေသောဇင်မင်းသူကိုတွေ့ လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို လက်မထောင်ပြလိုက်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုအားပေးသည့်ဟန်ဖြင့် လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ချက်ြပုံးလိုက်သည်။ကျွန်တော့်ရင်ထဲ့ ကြောက်စိတ်တွေသည်အလိုလိုနေရင်း ထွက်ပြေးကုန်ြကသည်။ ကျွန်တော်ရင်ထဲသို့သူပေးသည့် သတ္တိတွေ အင်တိုက်အားတိုက်ဝင်ရောက်လာသည်။ တီးဝိုင်းဆရာများကအချင်းချင်းကီးညှိကာ သံစဉ်ကိုစတင်တီးခတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေကတော့ဆောင်းည၏လေးညှင်းလေးနဲ့ အတူ ပြန့်လွင့်ရိုက်ခတ်နေသည်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှ ချမ်း လွန်း၍အခိုးတွေပင်ထွက်နေသည်။
တီးလုံးသံထွက်ပေါ်လာသောအခါ အောက်မှလူအုပ်ြကီးက လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြသည်။ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆံုး စိတ်ကိုငြိမ်အောင် ထိန်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ပါးစပ်ကို မိုက်ခွက်နားသို့ကပ်လိုက်သည်။
မိုလင်းတိုင်းလည်းမင်းစိတ်ပဲ ++++မိုးချုပ်တိုင်းလည်းမင်း စိတ်ပဲ ခဏတော့ခဲသွားမင်းမျက်နှာ ငါတစ်ကယ်ဦးညွှတ်သွား ပြီပဲ+++နောက်ထ်မင်းနဲ့တွေ့ ဆုံပါရစေ နောက်ထပ်မင်းနဲ့တွေ့ရပါစေ
အကြိမ်ြကိမ်ငါလေခိုးကြည့်တိုင်းမှာမင်းလေးပေးတဲ့အပြုံးဟာ ကမ္ဘာ မြေကြီးအေးချမ်းအောင်လှနေလိုက်တာ
ခိုးခိုးကြည့်တော့မင်းကိုပ+ဲ ++++ရိုးရိုးလေးနဲ့တိုးဝေခဲ့ +++++ အချိန်တွေရပ်တန့်ပေးနိုင်ရင်
လောကကြီးရယ်ကျေးဇူးပ+ဲ ++++နောက်မင်းနဲ့တွေ့ဆုံပါရစေ+++++ နောက်ထပ်မင်း နဲ့တွေ့ရပါစေ
ကျွန်တော်အောက်ကို ငုံ့ကြည့်မိသည်။ အောက်မှပရိတ်သတ်များက လက်ကလေးတွေဝှေ့ရမ်းနေပြီးကျွန်တော့်ကိုအားပေးနေသည်။ ဇင်မင်းသူကြိုကည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကိုမျက်စိမမှိတ်မျက်တောင်မခတ်ပြဲကည့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ခိုးခိုးကြည့်တော့မင်းကိုပ+ဲ ++++ရိုးရိုးလေးနဲ့တိုးဝေခဲ့ +++++ အချိန်တွေရပ်တန့်ပေးနိုင်ရင်လောကကြီးရယ်ကျေးဇူးပ+ဲ ++++နောက်မင်းနဲ့တွေ့ဆုံပါရစေ+++++ နောက်ထပ်မင်း ++++အကြိမ်ြကိမ်ငါလေခိုးကြည့်တိုင်းမှာမင်းလေးပေးတဲ့အပြုံးဟာ ကမ္ဘာ မြေကြီးအေးချမ်းအောင်လှနေလိုက်တာ+++++
အဆုံးသတ်ဂစ်တာသံလေးပြီး ဆုံးသွားသောအခါ ကျွန်တော်အသံသည်လည်း အဆုံးသတ်လိုက်သည်။”၀ူး ………………………….ဟူး …………………………………….”
ကျွန်တော်အားလုံးကို ဦးညွတ်ြပီးအရိုအသေပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက်လက်ကိုလေထဲတွင်ဝှေ့ ရမ်း လိုက်ပြီး နှုတ်ဆ်ကလိုက၏် ။
အောက်မှ အော်သြံကားသောအခါ ကျွန်တော့်အကြည့်ကို ဇင်မင်းသူရှိရာသို့ ပြောင်းလိုက်သည်။ဇင်မင်းသူက ကျွန်တော့်ကို လက်မွေှ့ ရမ်းပြနေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ပီတိတွေဖြင့်စိမ့်စိမြ့်ကီးကြည့်နေမိသည်။ ထိုအခိုက် ရုတ်တရက် ဇင်မင်း သူ လေထဲတွင် မွေ့ကနဲဖြစ်သွားပြီးမြေကြီးပေါ်သို့လဲကျသွားသည်။ ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးကျယ်သွားသည်။
ကျွန်တော် ထိတ်လန့် ပြီး စတိတ်စဉ်ပေါ်မှအပြေးအလွှားပြေးဆင်းလာခဲ့သည်။ စတိတ်စဉ်နားတွင်လူတွေရှုပ်ရှုတ်ခတ်နေသဖြင့် အတင်းတိုးဝှေ့လာခဲ့သည်။ ကျွုန်တော်ခေါင်းတွေ မူးနောက်လာသည်။ကျွန်တော့်ဦးနှော က်တွေ ကိုက်ခဲချင်သလြိုဖစ်လာသည်။ ပွဲခင်းထဲမှလူတွေနှင့်မီးရောင်စူးစူးကြီးတွေသည် ကျွန်တော့်မျက်စိထဲတွင် ချာချာလည်နေသည်။စတိတ်စဉ်အရှေ့သို့ ကျွန်တော်ရောက်သောအခါ ဇင်မင်းသူအနားတွင် လူတွေဝိုင်းနေကြသည်။
”ဖယ်ကြပါဦး ဖယ်ြကပါဦးဗျာ……………..အဒဲ့ါကျွန်တော့်ညီလေးပါ။ ”
ကျွန်တော့်ရှေ့ မှ ပိတ်နေသည့် လူနှစ်ယောက်ကို တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ဇင်မင်းသူရှိရာသို့တိုးဝင်လာခဲ့သည်။ ဇင်မင်းသူအနားသို့ ရောက်သောအခါ မြေကြီးပေါ်တွင်လဲနေသည့် သူ့ကိုကျွန်တော်ပွေ့ထူလိုက၏် ။ သူ့ ပါးစပ်ရှိ နှုတ်ခမ်းအစပ်မှသွေးတစ်ချို့ စီးယိုနေသည်။
ကျွန်တော့်သူ့ကို လှုပ်ကိုင်ြကည့်လိုက်သည်။ သူမျက်တောင်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာသည်။ကျွန်တော်သူ့ ပါးတွင်ပေနေသော သွေးတွေကိုလက်ဖြင့်သုတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူရုတ်တရက်သုတ်နေသော ကျွန်တော့်လက်ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းမှသွေးတွေသည်ဆက်လက်စီးကျနေဆဲပင်။
သူသွေးတွေ အံလာသည်။ ကျွန်တော်အြံသစွာ ဖြင့်သွေးတွေကို လက်ြဖင့်ခံထားမိလိုက်သည်။သွေးတွေသည် ကျွန်တော့်လက်ထဲမှ နေ၍မြေကြီးပေါ်သို့ တလိမ့်လိမ့်စီးကျကုန်သည်။ကျွန်တော့်လက်တစ်ခုလုံးလည်းသွေးချင်းနီနေသည်။
”ဇင်မင်းသူ………………………….စကားတွေ အများကြီးမပြောနဲ့လေ။ အကိုတို့ဆေးရုံကိုပြန်ရအောင်နော်။ ”
”ကျွန်တော့်ကို သီချင်းဆိုပြတာ အရမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာလေးရယ်။ ဆရာလေး ကျွန်တော်လေအရမ်းပျော်တာပဲဗျာ”
”မ………………ပြောပါနဲ့ တော့ကွာ ။ မင်းမောနေလိမ့်မယ်”
ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဆို့ဆို့ နင့်နငြ့်ကီးဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေပြာဝေကုန်သည်။ နံဘေးမှလူများစကားပြောသံတွေ ပွဲခင်းထဲမှဆူညံသံတွေဖြင့် လောကကြီးတစ်ခုလုံးသည် ငရဲပွက်နေသလိုကျွန်တော့်နားထဲတွင် ပေါက်ကြွဲမည်ဟီးနေသည်။ ကျွန်တော့်အသားတွေ တုန်ရင်လာသည်။ ကျွန်တော့်စကားသံတွေသည် မပြီပင်တော့ပဲ ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်မောဟိုက်လာ၏။
ကျွန်တော်မျက်နှာ တစ်ခုလုံးလဲ မျက်ရည်တွေစီးကျလို့ စိုရွှဲနေသည်။
”အဟွတ…် ………………အဟွတ…် ……………ဝေါ့……………….”
”ဇင်မင်းသ…ူ ………………ဇင်မင်းသ…ူ …………………….လုပ်ြကပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော့်ညီလေးသွေးတွေအံနေတယ်။ လုပ်ကြပါဦး။ ကျွန်တော့်ညီလေးကို ကယ်ြကပါဦးဗျာ။”
သွေးများအံထွက်လာပြီးနောက် ဇင်မင်းသူသည် ကျွန်တော့်လက်ပေါ်တွင် ငြိမ်သက်သွားသည်။ကျွန်တော် ရှိရှိသမျှအားတွေ ထည့်ပြီးအော်ပစ်လိုက၏် ။
”ခေါ်လို့မရတော့ဘူး ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ဇင်မင်းသ…ူ …………………ဇင်မင်းသူ……………….ကယ်ကြပါဦးဗျာ………………………..”
ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှ ကရောင်ကတန်းဖြင့် စကားတွေထွက်ကုန်သည်။ ကျွန်တော်ဘာတွေပြောနေမိမှန်းပင် ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော့် မသိတော့ပါချေ။ ကျွန်တော်ဇင်မင်း သူကို ကြည့်ရင်း ရှိုက်ငင်ငိုကြွေးနေမိသည်။သူ့ပါးတွင်ပေနေသည့် သွေးတွေကို ကျွန်တော့် လက်ခုန်ဖြင့်သုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူ့ကိုကျွန်တော်ပွေ့ကာ မလိုက်သည်။ သူဇက်ကျိုးပြီးကျွန်တော်ပွေ့ရာသို့ပါလာသည်။
ကျွန်တော့်အနားရှိလူများသည်လည်းယောက်ရပ်ခတ်ကုန်သည်။ ကျွန်တော်ဇင်မင်းသူကို ပွေ့လာခဲ့ပြီးလူအုပ်များကြားထဲမှတိုးထွက် လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲတွင် အရာအားလုံးသည်ရှုတ်ရှုတ်ခပ်နေသည်။ ကျွန်တော်ဘာကိုမှ ရေရေရာရာမမြင်တော့။ ကျွန်တော့်နားထဲတွင် စကားသံတွေဝေေ၀၀ါးဝါးကြားနေရသည်။
”ဟေ့ ကောင်လေး ………….နေဦးလေ………ဟေ့………”
ကျွန်တော့်ရင်တွေ ပြည့်ကျပ်တင်းရင်းနေသည်။ ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေလဲ အတိုင်းအဆမရှိစီးကျနေသည်။ ကျွန်တော် ဇင်မင်းသူကို မနိုင့်တနိုင်ဖြင့်ပွေ့လာခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းဇင်မင်းသူ၏ပါးစပ်မှသွေးများသည် မြေပြင်ပေါ်သို့ စက်ကနဲစက်ကနဲ ကျလာခဲ့သည်။ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ြကီးတစ်ခုလုံး ဓားဖြင့်အထိုးခံလိုက်ရသလိုစူးအောင့်သွားကာကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေလည်း မခိုင်တော့ပဲ မြေကြီးပေါ်သို့ ဒူးခေါင်းကွေညွတ်ကာ ကျသွားသည်။ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲတွင် ကမ္ဘြကီးက ချာချာလည်နေသလို အရာဝတ္ထုတွေသည် ကျွန်တော့်ကိုမူးနောက်နေစေသည်။ ကျွန်တော့် ရင်ခုန်သံတွေပြင်းသထက်ြပင်းလာသလို ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံ တွေသည်လည်း ကျယ်လောင်လာသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်တွေသည်တဖြည်းဖြည်းနက်မှော င်လာသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်အမြင်တွေသည် ပြာရီဝေလာကာလောကကြီးတစ်ခုလံုး အမှော င်ထြုကီးကျသွားပါတော့သည်။
အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတလေကျရင် မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လိုပါပဲ
တစ်ခါတလေကျရင် သိပ်ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းသလို သိပ်ပြီတော့လည်း ကြေကွဲဖို့ကောင်းပါတယ်
အဲဒီ့အချစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကပဲ ကျွန်တော့်နှလုံးသားလေးကို ၀ါးမြိုစားသောက်ပစ်ခဲ့တာပေါ့….
မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် ကျွန်တော်ဆိတ်ငြိမ်စွာ ရပ်တန့်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင်တော့ ကိုင်ထားးသည်က အရိုးပြာအိုးလေး တစ်လုံး။ ကျွန်တော့်နားတွင်ကျွန်တော့်အမေရှိသည်၊ဇင်မင်းသူ၏အဖေရှိသည်၊ ဇင်မင်းသူ၏အမရှိသည်။ ဇင်မင်း သူတော့ ကျွန်တော့် နားတွင် ရပ်တန့်မနေပါ။ရှိလဲရှိမနေပါ။ သို့ ပေမယ့် ဇင်မင်းသူက၏ ခန္ဓာ ကိုယ်အရိုးပြာလေးသည်ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင်
ရှိပါသည်။ ဇင်မင်းသူသည် ကျွန်တော့်လက်ထဲမှ အိုးလေးထဲတွင် ထာဝရငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်သည်။ မြစ်ရေပြင်ပေါ်မှ တိုက်ခတ်လာသော ခတ်ြကမ်းကြမ်းလေတစ်ချို့သည် ကျွန်တော်ပါးပြင်ပေါ်မှမျက်ရည်စလေးကို ဖယ်ရှားမပေးနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော့်မျက်ရည်တစ်ချို့သည် အရိုးပြာအိုးလေးထဲသို့ကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်တော် ပြာတစ်ဆုပ်ကို လက်ဖြင့်ဆုပ်ကာ ကိုင်မြှော က်လိုက်သည်။ ထို့နောက်
ဖြည်းဖြည်းချင်း လက်ကိုနှိမ့်ချလိုက်ကာ တဝေါဝေါစီးဆင်းနေသောမြစ်ရေပြင်ပေါ်သို့ မျှောချလိုက်သည်။ ပြာစလေးတွေသည် မြစ်ရေထဲတွင်ပျော်ဝင်ကာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော အိုးထဲမှ ပြာကလေးတွေကုန်သွားသောအခါ ကျွန်တော်ဦးခေါင်းကိုမြော့ပီး ကောင်း ကင်ြကီးကိုမြော့ကည့်မိသည်။ ကောင်းကင်ပေါ်မှ တိမ်တိုက်တစ်ချို့သည် ယောကျာ်းတစ်ယောက် ၏ အပြုံးသဏ္ဍာန်ပုံပေါ်နေသည်။ခဏကြာတော့ တိုက်ခတ်လာသော လေတစ်ချို့ကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ကာ အခြားတိမ်တိုက်တွေ ဖြင့်ရောနှောသွားပါတော့သည်။
စာပြီးချိန်၂၀၁၂.၅.၃၀ (နံနက်၆.၃၆ နာရီ)
စာကြွင်း။ ။ အချစ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကို ပေါ်လွင်အောင်ရေးပြသွားတဲ့ ညီလေး ချစ်ရဲအောင် @ Lovealone ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခွင့်ပြုသည့် အတွက် ကျေးဇူးစကားဆိုပါရစေ။ ‘Thank you’
Posted by Alex Aung at 2:09 PM3comments: